Ihe ịgbanwe | Site na Linux
Aga m alaghachi n'oge adịghị anya ...
Anọọla m ihe karịrị otu ọnwa na ahịrị kemgbe m mechara mkparịta ụka na Ubuntuneros nke saịtị ahụ, ekpebiri m ịgbanwe na OS X ruo mgbe ebighị ebi na agbanyeghị na enwere m obi uto na akụkụ ụfọdụ, n'otu oge ahụ enwere m mmetụta na enweghị m ụlọ ... n'oge na-adịghị anya M ga-eji Linux dị ka isi OS m ọzọ, nke ọma, na ozugbo oge ọkọchị gafere na anaghịzi m enwe oge iji kpọọ usoro 100 1 (xD).
Ihe kpatara post a dị mfe, Achọrọ m ịme nkatọ ntakịrị na Linux ma hapụ ndepụta m chọrọ, ihe m nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya ga-agbanwe ma dị mma yana na ha nwere ike imeri ndị ha na ha na-azọ.
Echetara m na ihe dị ka otu izu gara aga, Metalbyte gwara m na iji OS X dị njọ karịa iji Ubuntu, ma eleghị anya ee, ọ bụrụ na anyị atụle nke a site n'echiche nke nkà ihe ọmụma na nke na-abụghị nke bara uru, ikekwe akwụkwọ ikike Apple agaghị amalite ịkwa ákwá ... (Mana ka ekwuru ... Darwin kernel bụ n'efu dị ka Linux), mana ọ bụrụ na anyị echee banyere njiri na ndabara ngwa, Ubuntu dị n'azụ, (KDE karịrị OS X na nhọrọ, ee), ya mere achọrọ m ịhapụ ndepụta m chọrọ n'ihe ndị m nwere olileanya ịhụ n'oge adịghị anya na Linux:
1) Nye nkwado ndabere maka ide ihe odide Japanese, Ndị Korea wdg. Otu ihe masịrị m nke ukwuu banyere OS X bụ ikike m ga-ahọrọ site n beginning mmalite nke asụsụ iji dee ma gbanwee ya nfe. Na Linux ị nwekwara ike, mana ị ga-etinye ụfọdụ ngwungwu ..., nke m na nduku anaghị emecha gakwu m ..., ọ bụrụ na m maara nke a, ọ bụ njehie 8 XDDDD oyi akwa.
2) Egwuregwu egwu egwu mara mma karị ma rụọ ọrụ. Ọ bụ ezie na iTunes na kọmputa Windows na obere PC nwere ike ịdọrọ, na OS X ọ na-enwekarị arụmọrụ dị mma, eziokwu bụ, m ga-achọ ndị egwu egwu ahụ nke na-elezi anya na interface (mkpọtụ bụ ihe atụ), echefula ịgbakwunye arụmọrụ, dị ka nhazi ụda, nbudata ihe mkpuchi, ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ibudata egwu, echiche dị iche iche album ma ọ bụghị naanị ọhụụ a na-ahụ anya (clementine, amarok n'ime), ụlọ ahịa egwu, yana karịa, achọrọ m redio, ọtụtụ redio, mba, jazz, Japanese, okpukpe, akụkọ, egwuregwu ... (zuru ezu nke kpochapụwo icecast na sky fm ..., M ga-amasịkwa mkpu redio).
3) Libreoffice interface ume. Ee ..., echere m na ọ bụrụ na anyị enyochaa blọọgụ a afọ 2 gara aga ..., anyị ga - ahụ ndị na - arịọ maka mgbanwe mgbanwe, ihe na - erubeghị taa ma nke m na - amalite iche na agaghị eme. Ọ bụghị naanị na m chọrọ ka interface libreoffice mara mma, mana achọrọ m ka ọ dịrị ndụ m mfe karị, ọkachasị na CALC (enwere m ọtụtụ nsogbu na-arụ ọrụ ụfọdụ) ... nke Iwork n'ihe ụfọdụ.
4) Wayland. N'ebe a, anyị na-abanye n'akụkụ nke kpatara m iwe oge ụfọdụ na Linux, ojiji nke xorg. Wayland bụ ọdịnihu ma enwere m olile anya na n'oge na adịghị anya ọ nwere ike ịbụ ọkwa desktọpụ anyị ugbu a, iji xorg emeghị ka anyị ghara ịdọka na-enweghị onye na-ede akwụkwọ (kwin, compiz, compton ..), na o mekwaala ụfọdụ ihe iwe n'etiti ha:
1: Na mgbe ị na-abanye egwuregwu na mkpebi 1024 x 760, gbanwee mkpebi nke gburugburu ebe obibi ọ bụghị naanị nke egwuregwu ahụ.
2: Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ daa, ọtụtụ oge gburugburu ebe obibi dị na obere mkpebi na m ga-aga ịgbanwe mkpebi ahụ na nchịkwa nchịkwa .., mana mgbe ụfọdụ mkpebi ahụ dị ala nke na enweghị m ike ịpị del igodo ịgbanwe .., n'ihi na ọ dabara na ihuenyo ahụ.
3: Na-enwu gbaa mgbe ị gbanwere site na ihuenyo zuru oke na ọnọdụ windo, ihe atụ doro anya bụ mgbe ị na-ekiri ihe nkiri na mplayer na mberede ọkwa nke kmess ma ọ bụ ọmịiko pụtara.
E kwesiri ka Wayland gbochie ihe ndia niile ime.
5) Audio: Jack .., pịa ..., alsa, agbalịrị m ha niile, ahazi m ha niile, ma taa, ọ nweghị onye nwere ike ịgwa m otu m ga-esi dekọọ ọdịyo nke pc na igwe okwu n'otu oge, inwe ike ịme egwuregwu ... , na banyere pulseaudio enwere m ike ikwu ihe ọjọọ.
Ọ bụ ezie na pulse bụ nnukwu ọganihu na arụmọrụ ebe ọ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe, yana ekweisi USB, 5.1 ọdịyo na ahịhịa ndị ọzọ, na pc m, anaghị m eme ya, m na-ekwughachi, ọ gwụla mkpọtụ kpamkpam, enwere m ike ịchọpụta na mkpọtụ dị na egwu ahụ .. na mba, ọ bụghị nsogbu nhazi, emere m ihe niile m nwere ike, gbanwee ntugharị, deactivate ma rụọ ọrụ dịka ntuziaka dị na Archlinux .., mana onweghị ihe, rue ugbua emeela m nsogbu karịa uru (mma Anaghị m ekwu maka etu esi aga mmanya wine).
N'oge a, ọ dị ka ụfọdụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ site na okpu uhie iji kparịa onye ọ bụla na-ekwu na pulseaudio na-eme ihe ọjọọ ((Gentlemen, obere nkatọ onwe onye… ọ gaghị emerụ anyị ahụ…, ọbụlagodi ndị ọrụ Apple na-eme mkpesa banyere ọtụtụ ihe na Nzukọ ha).
Enweghị m mkpesa ọzọ, ha bụ ihe ndị a dị mfe, n'ihe ọ bụla ọzọ ekwenyere m na GNU / Linux dị elu, nhazi, nhọrọ maka ndị ọrụ ..., n'eziokwu, ọbụnadị egwuregwu agaghị enwe nsogbu, ebe ọ bụ na ma eleghị anya ihe niile egwuregwu ndị dị maka OS X ga-abụ maka Linux (ekele opengl).
Enwere m olile anya na n’otu afọ site ugbua, mgbe ị na-elele nke a ọzọ, apụrụ m ịsị na ọtụtụ n’ime ya bụ ihe gara aga.
Ọ bụrụ na mmadụ mgbe post a, chọrọ ịbịa gbaa ma ọ bụ gbaa ọkụ, enwere m ike ịsị na anaghị anabata ya, m ga-achọ na anyị nwere ike iji nwayọ tụlee akụkụ ndị a na enwere ike ịnye echiche n'ejighị nne onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ihe ịgbanwe
Ihe 198 kwuru, hapụ nke gị
Banyere onye ọkpụkpọ, ị tufuru ihe ọ bụla site n'ịgbalị guayadeque ... Amaara m ya obere ihe karịrị afọ abụọ ... na anaghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla ... belụsọ m nọ na windo ... dị ka n'oge a xD. ... ahh ma maka nkatọ onwe onye ọ dị ka ọ dị mkpa ...
Zaghachi na progdebian
Aga m enye gị uto, daalụ! 🙂
Gbalia tomahawk na yarock too. Tomahawk nwere Mac mbipute 😉
Tomahawk maka m kachasị mma;), ọ ga - achọ redio ka agbakwunye ma ọ ga - ezu oke: '(
Mmm nwalee yarock mgbe ahụ, ọ na - akwado ụdị redio a.
* Gwuo egwu redio (icecast, shoutcast, faịlụ iyi ọrụ)
Guayadeque M na - eji ya oge ụfọdụ, ọ masịrị m nke ukwuu, ọ dịkwa ka ọ zuru oke na arụmọrụ, nhọrọ na ihe niile. Naanị ihe na-ekwenyeghị m ma ọlị bụ na ọbá akwụkwọ egwu na-adọnye m nwayọ nwayọ mgbe etinyere m ọtụtụ egwu.
Ma ebe m gbanwere KDE m tụgharịrị gaa Clementine, enwekwara m obi ụtọ na ya. Naanị m na-atụ uche aghụghọ ole na ole na-enweghị oke mkpa, dị ka inwe ike ịme okwu na Libre.fm na ọ bụghị naanị Last.fm (ihe m na-atụ uche na Guayadeque, nke mere ka ha abụọ n'otu oge).
Ihe ọzọ masịrị m na oge GNOME2 m bụ gmusicbrowser, karịa ihe niile n'ihi enwere ike ịhọrọ ọtụtụ iitationomi ihu na ndị egwuregwu ndị ọzọ (dịka Exaile, Rythmbox na ọtụtụ ndị ọzọ) n'agbanyeghị na ọ bụ otu ọkpụkpọ na ihe ọ bụla.
Agam a lee anya (ma nu) ndi ozo ikwuru na nke m amaghi 🙂
Ka anyị lee ma m ghọtara: a na - akpọ blog a "Site na Linux" na onye edemede na - akọwa onwe ya "Ekwenyesiri m ike na opensource dị ka ihe ngwọta iji bulie ma kwalite ngalaba kọmputa" na m gafere ọkwa nke onye na - eji Apple? Ọ bụ egwuregwu?
M na-ajụ onwe m ihe a… O_O… pandev, Apple? Kpọrọ ihe? O_O
Yoyo bu onye ihe ntecha ihe kariri m XDDDD… .., to quote someone eheheheh. Naanị maka oge ọkọchị ka m na-akpọ usoro 1 na oku nke ọrụ XD ..., na Septemba ị ga-ahụ m ọzọ iji arch ahahah
N'obodo m enwere okwu na-ekwu "ọ bụrụ na ọ dabaghị na ị naghị ekesa", agba (ibu, egwuregwu, ọchị) na-agara gị, agbaba n'ime ndị ọzọ xD
Ezigbo edemede iji pụọ na "usoro", ọ baghị uru na ọ bụ blọọgụ Linux, site n'oge ruo n'oge ọ dị mma ịchọpụta ihe ndị ọzọ na-abụghị Linux OSs na-ejikwa.
Na, na akụkụ, maka Gabriel na Sandy.
Ọ na-emetụ bọọlụ m aka na, oge ọbụla akpọtụrụ ihe ọzọ na-abụghị Linux, mmadụ ga-awụli elu kwuo ihe dịka “kpọrọ ihe, ị kwuru OsX? oh ... by ... chineke »zuru oke nke oke nzuzu, ma ọ na-eji OsX bụ nsogbu ya na n'ezie ihe ọ na-ekwu n'isiokwu ahụ abụghị obere, o nwere ezigbo ihe ịga nke ọma dị ka X.org ma ọ bụ ọdịyo n'ọtụtụ ikpe.
Echere m, ọ dị m ka ndị mmadụ anaghị adị mkpụmkpụ, mechie, eziokwu dị mfe nke ịkatọ mmadụ ma ọ bụ ihe ha dere naanị n'ihi na ha na-eji sistemụ arụmọrụ ọzọ, mgbe ahụ naanị n'ihi na ha jiri OsX bụ echiche ha nwere ike iwepụ? Ọ na-ewute gị nke ukwuu na m na-eji OsX ma kwupụta echiche na SL? Ezigbo ndi mmadu, zuru ezu, nke a bu ihe nzuzu, mgbe ahụ ha na-akpọ onwe ha ndị na-agbachitere nnwere onwe, ma ha anaghị ekwe ka mmadụ nweere onwe ya ime mkpebi dị mfe dịka usoro eji eme ihe.
Karịsịa Sandy gị, bia, ị dịghị otú ahụ.
Ehm ... jiri nwayọ nwa nwoke ...
Ekwenyere m na Nano, ndị mmadụ nwere nnwere onwe iji ma nwalee sistemụ arụmọrụ ha chọrọ na nke ahụ abụghị ihe mgbochi izere inye echiche na OS ọ bụla Ọ bụrụ na m ga-achọ ịmatakwu nke ọma bụ arụmụka nke Metalbyte wepụtara ịsị na OsX dị njọ karịa Ubuntu.
Onweghi ihe ọ bụla, naanị m gwara ya ka ọ bụrụ egwuregwu, na njedebe nke ụwa abịala kemgbe ọ ghọrọ onye isi na-adịghị mma, anyị niile makwaara na ọ bụ onye na-emeghe uche ruo ọnwụ ..., ọ zara m na nke ahụ akpaokwu XD
Ọ bụ eziokwu na ihe nano na-ekwu, maka akụkụ nke m naanị ihe m ga-ekwu bụ pandev OsX? Have nwere ọla kọpa! hehehe
N'ezie, OSX bụ ihe nwetapụtara nke FreeBSD mana otu n'ime ndị ọjọọ ahụ, yabụ echiche gị ka na-ebu ibu dị ka ọ dị na pandev92 (Ekwere m na m na-eji nsụgharị Windows ka njọ karịa diski diski iji zere nsogbu melite enweghị isi na desktọọpụ dị njọ dị ka Windows 8/7 dị, mana m na-ejikwa Debian Stable ka m wee lekwasị anya na ihe na-eme na ụwa Debian).
Aghọtara m na ọtụtụ ndị ọrụ a na-ahụkarị ịnụ ọkụ n'obi banyere ọgba aghara, mana m na-abanyekwa na ndị ọrụ GNU / Linux na-arịwanye elu bụ ndị maara n'ezie etu esi ekwupụta onwe ha ma kwanyere mkpebi ndị ọzọ ùgwù.
Ọ ga-amasị m ịmekọrịta Mac, mana maka oge na ego, enweghị m ike. Ka o sina dị, ọ dị ka ọ nwere ọtụtụ ihe enwere ike iji nweta ya site na ochie FreeBSD, mana ka, GNU / Linux bụ nke enweghị atụ. Naanị ihe na-efu bụ ndị mmepe sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ ndị ghọtara na paradaịs nkịtị nke ndị ọrụ nkịtị abụghị njikwa, mana GUI na ịdị mkpa nke ngwaọrụ ahụ.
Ọ ga-abụ otu Nano ahụ site na Tira Ecol?
Na na m na-emegide, na nnwere onwe nke Software dị n'elu nnwere onwe nke ịhọrọ na nkwupụta.
Na m kwenyere na gị. Ihe ọzọ bụ, echere m na ndidi n'ebe ndị ọrụ ndị ọzọ nọ nke ndị nwe ha na-atụ ụjọ site na okwu mbụ na-eweda ha ala.
Anaghị m ahụ oke njọ ọ bụ iji ihe ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ site n’oge ruo n’oge. O nwedịrị ike ịba uru iji nweta mmụọ nsọ wee mụta ihe site na "onye iro" ahụ site n'ịhụ ka ihe niile dị na ngwanrọ ahụ gafere n'efu, yana ịbụ ebumnobi ọzọ.
Ọ bụrụ n forihi na dịka ọmụmaatụ m rụkọtara na blọọgụ egwu igwe, m kwesiri iche na m bụ onye ihu abụọ maka na m na-ege egwu egwu, oge gboo, jazz, ụda olu, wdg.
Ma otu ihe bụ na ị na-ege ntị na nke ọzọ na ị bulite ụdị egwu ọzọ
Ọnọdụ Taliban = na ????
Dị ka m si kwuo, anyị kwesịrị ịnwekwu posts site na OS ndị ọzọ maka PC yana enwere posts sitere na OS maka ekwentị, ọ dị mma, ọ dị mma mgbe niile ịchọpụta ihe ndị ọzọ na-eme.
OSX na-agwụ m ike na achọpụtara m na ọ dị arọ yana sọftụwia ngwanrọ nke ị gaghị ebi na ya karịa maka ndị ọzọ ka nwere iji ọfịs windo na ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịgbawa. Na ekwesighi ikwu maka ogo ngwaahịa ha na kwa ụbọchị na-ewute m karịa, nke ikpeazụ m na-ekwu na ntọala doro anya ebe m nwere mac abụọ ha na-arụ ọrụ n'ụlọ a maka ojiji sayensị. Ikwupụta ya ọ dị m ka ezigbo ọkwa na dịka ekele maka ọrụ gị !! Daalụ Ariki
Ekwenyere m na ụfọdụ isi, mana isi ihe ndị ọzọ dị ka nzuzu. Karịsịa m kwenyesiri ike na ụda na Linux.
Agbalịrị m ọtụtụ nkesa, nhazi dị iche iche ma bịa na nkwubi okwu na ndị mere pulseaudio kwesịrị ka a nwaa ha n'ụlọ ikpe ndị omekome mba ụwa maka mpụ megide ụmụ mmadụ.
ahaha na foto nke onye a na-ebo ebubo sheriff eheheh :) .., ma ọ bụrụ na pulseaudio tikuru eluigwe xdd ...
Nda ụda ahụ emetụtaghị ndị ọkwọ ụgbọala ahụ? Eziokwu bụ na enwetụbeghị m nsogbu, mana n'ihi na ekweisi m, ndị ọkà okwu na egwu enweelarị XD mediocre.
ọ bụ eleghị anya a mix n'etiti ọkwọ ụgbọala na ndị ogbenye pulseaudio àgwà = egwu XD ...
Na-ekwenye kpamkpam na ụda ahụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ole na ole m na-atụ uche site na oge ochie m na nke dịpụrụ adịpụ nke Windows, na ndị ọzọ ịbụ 'onye hụrụ egwu' XD.
Luckily, on the bad side or “not-so-good” it doesn't sound too bad, ekele eziokwu na m nwere a minimally ezigbo ụda kaadị. Agbanyeghị na usoro nke ịdekọ na ihe ndị ọzọ karịa ige ntị, ihe niile ka na-acha akwụkwọ ndụ. Iji bụrụ onye egwu na GNU / Linux ị ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ injinia kọmputa n'otu oge xD.
Ekwadoro m akwụkwọ ahụ n'ihi na agbanyeghị na ọ bụ, ọ bụ echiche nke onye edemede banyere ihe ndị kwesịrị ka emeziwanye na GNU / Linux. Mana, enwere ọtụtụ ihe m na - apụghị ịghọta:
1- M na-etinye Debian na Laptọọpụ m na-arụ ọrụ na anaghị m enwekarị nsogbu, ya bụ, m na-etinye ma chefuo ya. Ikekwe nsogbu bụ na onye edemede, nke ahụ bụ pandev, na-agbanwe nkesa dị ka ndị na-agba ume 😀
2- Ọ bụ eziokwu na ọ masịrị m na ngwa ndị ahụ dị mma, mana eziokwu ahụ bụ na onye ọkpụkpọ ọdịyo adịghị mma .. nke ahụ abụghị ihe kpatara ya, ma enwere ọtụtụ egwuregwu, ma na nchekwa na saịtị nke atọ .. ¿ ị nwalere ha niile?
Ọ dị mfe ma dịkwa mma iji Windows na OS X, n'ihi na n'ezie anyị niile maara na ha nwere ndị ọkwọ ụgbọ ha n'ihe banyere Windows yana n'ihe banyere OS X, naanị ha na-elekwasị anya na ịkwado otu ngwaike.
Ndụmọdụ m: Jiri Intel niile, nsogbu anaghị adịkebe ... Ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu, hapụzie nkebi na Windows na voila, ma ọ bụ ka mma, zụta njikwa, nke e mepụtara maka nke ahụ.
Pandev, nwee ọmarịcha ọnụnọ na OS X .. Linux ọrụ na-asị ndewo.
Ekwenyeghi na windo…, na windo enwegorom nsogbu na audio karia na Linux na pulse, directsound, na laptọọpụ nwere intel hda audio, o nyela m isi ọwụwa. ụdị nghọta a na-eme mkpọtụ dịka: »NAAAAAAAAAAAGAGUUUUUUUUUUUUUUUUU» na ịmanye gị ịmalitegharịa pc site na bọtịnụ nkwụsị .., ọ bụ ezie na Windows nwere nkwado dị ukwuu, nkwado ngwaike nke abụọ a na-abụkarị ihe nzuzu ...
WTF? Kedu ihe ị na-ekwu? Kedu ka ị ga-esi kwado iji windo eme egwuregwu? oburu na anyi choro Linux ka igba egbe.
Nke a ziri ezi na ihe niile. Lelee ngwa ndị kachasị mkpa
(dịtụ) nke sistemụ nrụọrụ bụ Player, Office Suite, na Egwuregwu. Ihe ndị a bụ ihe na-adọta ndị ọrụ (Nkịtị). Amaghị m n’echiche m.
Echere m na ọ bụ eziokwu n'ihe niile. Echere m na ị naghị anabata nkatọ. Ana m eji Debian ekwesịrị m ịsị na ọ dị mma n'ihe niile.
Ezigbo mma post. Ekwenyere m na gị n'ihe niile :). (Ọ bụghị sarcasm hehe)
Karịsịa na Wayland na Pulseaudio.
Eziokwu bụ, echere m na tupu ị rịọ maka mmelite anya na LibreOffice, anyị kwesịrị ilekwasị anya na ịmecha arụmọrụ ya na ndakọrịta na OOXML (na nke ikpeazụ bụ isi maka ọtụtụ ndị ọrụ iji ya, na sistemụ ọ bụla).
Ekwenyere m banyere Pulseaudio, Wayland bụ naanị okwu ichere ntakịrị ka ọ rute… Na enwere m obi ụtọ na Clementine, n'ezie.
A na m ekwu na ndakọrịta nke LibreOffice na M. Office kwesịrị ịga ọkụ mmụọ (gbaghara okwu ahụ) Gini mere ị ga-eji kwekọrịta mgbe ha kwesịrị ịchọpụta otu LibreOffice kwesịrị imeziwanye usoro ODT iji mee ndị ọrụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ a hụ ya n'anya ma dochie M. Office n'ụzọ doro anya, na doc, usoro docx ma ọ bụ ihe ọ bụla Microsoft chọrọ ịkpọ ya n'ọdịnihu emechaghị eme (shit, nsị, poop, wdg) tupu ODT. Ndị nke LibreOffice na-egbusi oge dị ukwuu na-achọ ndakọrịta na ụlọ ọrụ Microsoft mgbe ha kwesịrị ikpuchi ya na njirimara ọhụụ na nke ka mma karịa ndị ọ nwere ma hapụ ndakọrịta na ndabere, ọ dị mkpa iji tọghata LibreOffice na KDE ma e jiri ya tụnyere ihu Windows na OsX . Nke ahụ bụ echiche m dị umeala n'obi amaghị m ihe unu chere.
pandev92: ị wụnye osx na PC? Achọrọ m ịnwale ya, enwere m niresh iso ebudatara mana amaghị m ma ọ bụrụ na mgbe m wụnye ya, m ga-enwe ike idobe windo Windows ma nwee ike iji ya na dualboot. Ọ bụrụ na ozugbo arụnyere m wụnye grub, m ga-enwe ike ịmalite na ma? Daalụ
Eeh, mana enweghị m ike ị nye gị nkwado na blọgụ linux, ọ dị m mma na XD…, ọ bụrụ n ’ị jiri google enwere ezigbo ntuzi aka ga esi esi wụnye ya ma ọ bụrụ na inwee ngwaike ziri ezi.
Osx na-agwa gị ka ị kee na gpt .., yabụ na echere m na ị tufuru windo ..., biko jiri google> ____ <, ọ dịghị onye nyeere m aka na m mere.
Ihe nyere m nsogbu banyere OSX bụ na interface Aqua na-eri vidiyo karịa Windows Aero n'onwe ya, n'agbanyeghị nke ahụ, ndị nrụpụta anaghị eme mkpesa banyere ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-enye m nsogbu site na nnabata nke ụfọdụ ụmụ nwoke na-amaghị etu ha si asọpụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ nke nyiwe ndị ọzọ karịa GNU / Linux ndị na-eleta anyị ebe a.
Ekele compadre, na ọ bụ na obere nwa nwoke a bụ ezigbo onye maara ihe, Chineke enweghị ụzọ isi gbochie ya posts? ha bu ihe-árú nke jọb .uru onwe-ha.
Onye dọrọ aka na ntị abụghị onye aghụghọ, agala m adọ gị aka na ntị.
HAhahaha tozuru nwoke tozuru etozu.
Ee, mana tinye akụkọ ahụ, n'ihi na ihe ị na-eme dị njọ karịa nsị na-esi isi. Echere m na ị ga-adị n'etiti 12 na 13 afọ na ịbụ fap fap ụbọchị niile n'ihu pc.
Kedu nke na-agagharị? Kedu? Ugbu a, trolling na-agwa gị eziokwu gị? nwere echiche di iche na nke gi? Bịanụ, n'ụzọ, echiche gị anaghị agabiga mba ndị ọzọ na-eto eto nke na-eji kọmputa eme ihe na nke mbụ, mana n'ezie ị bụ panacea nke ngụkọta oge, nri? hahahaha, ka anyị lee ma ọ dịkarịa ala, ị ga-amụta ide edemede dị ka ndị edemede ndị ọzọ na saịtị a, ịmalite site na ọzụzụ ha na ogo ndị okenye.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu, ị na-emere m nnukwu mmachibido iwu, ị ga n’ihu.
Hahaha na gini kpatara ha ga eji machibido m nwa nwoke? maka ịgwa gị eziokwu? Ka o sina dị, ihe ha kwesịrị ime bụ igbochi gị ide ihe ndị dị otú ahụ na-adịghị mma, nke a na-ahụkarị nke nwatakịrị aghụghọ.
Ha ga-egbochi gị maka iwe, iwe, ikwenye na ị nwere eziokwu zuru oke, iso ndị editọ megharịa ugboro ugboro, ka emechara, na nkenke, ndị ọrụ na-agagharị agagharị :). Aga m ahọrọ ileghara gị anya ruo mgbe a machibidoro gị iwu. 🙂
N'ezie amaghị m ihe kpatara m ji aza gị, ọ bụrụ na "posts" gị (ọ bụrụ na enwere ike ịkpọ ha ya) na nkọwa gị dị obere, na-enweghị arụmụka yana obere onyinye, amaghị m ihe kpatara ị ji eme engineer na doctorate si MIT mgbe only gosipụtara nanị iwe gị dị ka nwatakịrị emebi emebi, ị na-eme ndị ọzọ ihere.
Onye ohi na-ekwere na onye ọ bụla bụ nke ọnọdụ ya 😀
Sayensị gosipụtara na ị bụ nwata.
otu ihe m na-ekwu, SIR
JAjajaj yayaya ị bụ nwoke nke nduku na otu ị si asụ asụsụ bekee, kedu ụdị a capo, na nkenke, enwere m olile anya na ị gụọla ihe nke ọma ka ị wee gbalịa ịmụ ihe na ndụ, rue mgbe.
Gaa n'ihu na circus nke m nwere obi ụtọ 😀
Oge abiala !!!
Ọ dị m ka ha nwere ike ịhapụ isiokwu ahụ ugbu a. Dị ka m na-ekwu mgbe niile, pụọ ma dozie ya site na Hangouts, Yahoo Messenger ... ma ọ bụ ihe yiri ya. Biko.
Ọ dị nwute m @elav mana anaghị m agbakwunye ụmụaka na gmail ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke a, o zuuru m na ụfọdụ ndị odide na-akwụsị iberibe dị ka nwoke a na-eme, na ederede niile anaghị ekwu "windo kacha mma, ballmer bu onye amuma na bill gate bu chukwu.
Dị nnọọ ka a gwara m ka m sọpụrụ ndị mmadụ mgbe m gwara ha ihe, ana m arịọ ka ndị a na-asọpụrụ m, ndị kwenyere na ha nwere eziokwu zuru oke ma kwenye na ha nwere ikike imebi echiche nke ndị ọzọ.
Daalụ @elav maka ịhapụ ọtụtụ ihe karịa na muylinux.
Na nkwanye ugwu dị ukwuu, Elav, enyi gị bụ obere nwatakịrị nwoke na-adọrọ adọrọ nke kwenyere na ya bụ ihe ngwọta nke ngụkọta kọmputa, echere m na nne ya ga-ata ụta na a kwenyere ya nke ọma, amaghị m ihe kpatara ha ji hapụ nwatakịrị a ka ọ dee uche ya na nzuzu ya na-agwụ ike. guo onye di otua na adighi enyi, ekele.
Ma ebe ọ bụ na ọgụ a agaghị akwụsị ruo mgbe otu onye n'ime anyị nwụrụ, ọ masịrị m na ọgụ a ga-eme n'ọhịa ebe e mere ya: ebe a na-eme ya. Ma ọ dịkarịa ala, peeji ahụ adịghị ejupụta mgbe ọ na-aza ajụjụ na ozi ọ bụla nwere ike ịkọwapụta karịa ịde ederede blockquote na nkọwa nke blọọgụ a mere na WordPress (na ị kwesịkwara ịghọta na WordPress abụghị ihe na-eme ngwa ngwa iji hazie ụdị data a dị ka Drupal, ya mere buru n'uche ndi admins.
n'ezie, dịka maradona ga-asị gị, "na ị ga-anọgide na-amị ya." kocolio
Pffta eyen, amaghi m otu i gesi ejide ya, olee otu i si mejọrọ ……
n'ezie, dịka Maradona ga-asị gị, "na ị na-anọgide na-a herụ ya." kocolio
Hahahaha ugbu a, a ga m eji onye ozo si MaraCona zaa gi nke oma
I BU N'IME !!!!!
maka oge nke atọ: n'ezie n'ezie, dịka Maradona ga-agwa gị, "na ị ga-anọgide na-amị ya." kocolio
lee ma ichoro ka ihe nile di mfe tinye Linux Mint na Cinnamon ma obu Mate na voila, mana jiri Apple .. Biko, kedu ka iguru na elu site na nghota ndi ekwuru .. 🙂
Enweghị ebe m kwuru na nsogbu m bụ na ihe niile dị mfe, ekwuola m maka nsogbu ọrụaka (vidiyo na ọdịyo), na ọdịdị (ọkpọ egwu).
Maka mfe distros m na-akwado ọhụrụ Linux Linux.
Ma mba, anaghị m eji apụl maka nsogbu ndị a, ana m eji ya n'ihi na achọrọ m igwu egwu ma ajụ m ịwụnye windo iji kpọọ usoro 1 na cal nke ọrụ.
Mgbe ezumike m gacha, m ga eji arch as usual.
Ọfọn, ọfụma: D .. Ma echere m na ị gaghị eso Apple nọrọ ọnwa abụọ ebe ọ bụ na njedebe ya ga-eju gị anya: D .. Nwee anụ egwuregwu wolf ma cheta na Wine, Playonlinux na Steam ị nwekwara ike igwu 🙂
Ọ ga-akara m mma Steam karịa ịkwa ákwá n'ihi oke ike Mmanya na-enye m. Ka o sina dị, m ka na-eji Windows enwe ike ịrụ ọrụ m na sọftụwia nwegasịrị (CorelDraw, Illustrator, Dreamweaver ...), mana ọ gaara amasị m ka Krita, GIMP, Inkscape, Bluefish, na ọtụtụ mmemme imepụta n'efu ndị ọzọ kuziere m. , ma ọ dị mwute ikwu na Peru ha gbanyere mkpọrọgwụ kpamkpam na ngwanrọ ngwanrọ.
A Linuxero nke gara Mac?
Nnukwu aghụghọ !!! mee ka ọwa nwuo, ịchụ nta bidoro !!! ¬_¬
ma dee ya na mac XDDD .., mac mini AHHAHAHAHAHA
Manu Rincon dijo
M na-atụ ụjọ na okwu ahụ bụ ihe ọchị 🙂
Zaghachi Manu Rincón
Aghọtala m ya xD mgbe m zara, ọ nweghị ihe ịtụ egwu.
[sarcasm] A gụnyekwara anyị lackeys Steve Ballmer? Ebe m na-eji Windows Vista [/ sarcasm].
Anaghị m ekwenye nke ọma gbasara ndị egwuregwu ahụ, VLC bụ nke kachasị mma kachasị mma enwere. Banyere mkparịta ụka dị n'etiti ndị ọrụ naanị maka iji distros dị iche iche ma ọ bụ DE, enwere nnukwu nsogbu na Linux: nkewa, mana nke ndị ọrụ, akụkụ buru ibu kama itinye onyinye na mpaghara yana ndụmọdụ ma ọ bụ nyere aka naanị itinye onwe ha n'ịtụle N'ime ụdị fanboy kachasị dị ọcha banyere nke distro, mmemme iji rụọ ọrụ X ma ọ bụ DE ka mma, ole nwa kDE, Debian, Archlinux, Ubuntu, wdg ahụbeghị ebe a ma ọ bụ ebe ndị ọzọ na ebumnuche ịtụba sh * t na ndị ọzọ n'ihi na (inye ihe atụ) onye ọrụ Archlinux X nwere mmetụta dị elu karịa ndị ọrụ Ubuntu n'ihi na nrụnye na iji distro ha chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma.
VLC bụ ọkacha mmasị m ọkpụkpọ mgbasa ozi. M na-eji ya na Windows na GNU / Linux, ọ bụkwa nke m na-elele vidiyo ọ bụla na usoro m ga-emepe. Ọzọkwa, ọ nwere playlist nhọrọ nke bụ n'ezie ezigbo.
vlc bụ naanị ezigbo ọkpụkpọ vidiyo maka osx, maka ọdịyo anaghị m enwe mmasị na ya ma mana.
Ọ bụrụ na ị nwere ego ịzụta Mac, anaghị m ahụ nnukwu nsogbu ... ka anyị hụ ka o si aga na mgbochi, n'ihi na Apple bụ ụzọ ha ... ma ọ bụ ihe ọ bụla!
Nke ukwuu na-ekwu okwu banyere free software na mgbe ahụ na-akwado ihe na-kpam kpam n'uzo na ezighi ezi, ya mere unethical. Ọ dịghị ihe ọzọ megidere free software karịa unethical.
Ika aku aka
[Ikele maka Cocolio]
Ebee ka ị hụrụ na m kwadoro ka ị gbagoo hackintosh? n'ihi na ahụghị m ya.
Ana m ekwu maka okwu nano, mana enwere ike ghara ịghọta ya.
ahh ok, lee, nano kwuru na m na-eji hackintosh XD
Echere m na ọ bụ ihe dị oke mkpa, xD n'ihi na okwu gara aga kwuru banyere ihe ngwaike na-akwụ. ndo
Hmm ee, m na-ekwu maka ya ... anyị nwere ụfọdụ ndị nzuzu mara mma na-achọ ikwu naanị maka ime ya ... Agaghị m abanye na nkọwa, agbanyeghị Itachi, na-agba mbọ ịkọwa ihe ị gụrụ karịa, na m chee na m na-efu efu ụfọdụ ihe.
Hackintosh dị ka ndị dị otú ahụ ekwesịghị ịbụ iwu ma ọ bụrụhaala na ịzụrụ sistemụ arụmọrụ ma wụnye ya na PC, ejighị m n'aka na nke ahụ mana echeghị m na enwere ikike na-egbochi gị ịwụnye OsX na ihe ọ bụla ọzọ Mac.
Ee @nano, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ akụkụ nke ikike apụl, mgbe ahụ ikike a bara uru na mba ụfọdụ ee na ndị ọzọ ọ bụghị maka imebi iwu ka elu.
Ekwesiri icheta na EULA, gbadoro ukwu na iwu US ma otutu ihe megidere iwu na Europe (ewezuga Germany).)
Lee ị nwere ike ịzụta hackintosh iwu! na ha na-eresị na Europe n'ihi na ihe karịrị 5 afọ 🙂
O megidere iwu naanị na United States na mba ole na ole ndị ọzọ.
Ma ebe ọ bụ na anyị bụ, ikikere apụl abụghị ezigbo ụkpụrụ ...
Eji m OSX mee izu ole na ole maka ebumnuche ọrụ (ọzụzụ ọrụ aka) ha kpọpụtara m ngwa ngwa maka "ajụjụ" hahaha.
Aesthetics bụ omume ya kachasị mma maka m, yana ụfọdụ arụmọrụ na njikwa nke desktọọpụ ya (mmetụta, ụzọ mkpirisi, wdg) mana ngwaike ya nwere oke maka ụgwọ / uru ọ na-eweta ebe ọ bụ na sistemu ahụ bụ anyaukwu n'onwe ya.
Ekwesịrị m itinyekwu RAM ka ọ bụrụ ọrụ ọma ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ dị arọ, nke a na Macbook, iMac na macmini, iji nwee ike iji ya na-ejikarị. Akụrụngwa ya nwere oke, mechiri emechi, yana ngosi. Enwere m mkpọka wee kpọọ m ruo mgbe agbanyere usoro ahụ niile (arụmọrụ iji wụnye ihe onyonyo sistemụ, nke dị n'otu n'ime ya).
Mmechi anaghị eme ka m kwenye, dịka usoro ma ọ bụ site na nkà ihe ọmụma, site na ọkwa nnabata. A plastic girl ebe ọ bụla ị hụrụ ya. Ma enwere ihe maka onye ọ bụla.
banyere ngwaike ihe ọ bụla na-ekwu, ọ bụ eziokwu, ọ ga-abụ ọtụtụ afọ tupu ha ahụ m zụrụ ihe XD
Ana m ahapụrụ gị otu mkparịta ụka na 1998 na Onye guzobere KDE
Banyere Gnome: Ebe ọ bụ na ihe niile onye nrụpụta KDE na-ekwu banyere Gnome na ọha na-atụgharịrị ka bashing, m kwesịrị ịnọ jụụ. Ka o sina dị, ọ dịghị ihe dịka agha Gnome / KDE, ọbụlagodi na ndị mmepe. Ndị mmepe na-asọpụrụ onye ọ bụla, na-eme ka aka ya ruru unyi ma na-ede koodu isi. Ka o sina dị, agha ọkụ na-eme ka m nwee mwute, na-ebibi nkwenye m na enwere ma ọ bụ dị ka linux-community. Ọ bụghị naanị KDE, ọ bụ ihe niile. Kwupụta dịka ọmụmaatụ ị dere onye ederede ọhụụ. Ndị mmadụ ga-ire gị na ị melite emacs kama. Ndị ọzọ ga-ebido na-arụ ụka na vi nwere ọnọdụ yiri nke a ma lee anyị aga. Ọ dịtụla mgbe ị gụrụ mgbasa ozi sitere na emacs ma ọ bụ vim onye nrụpụta na-etisa nke ọzọ? Ma ọ bụ gwaa na ị dere LaTeX frontend. Ndị mmadụ ga-agba gị ọkụ na ụzọ ha si ede TeX ugbu a ka mma, dị ike karịa, na-adịghị ka ụdị ya, wdg. N'ihi gịnị? Ọtụtụ ndị ọrụ Linux dị na ya dị ka ha kwenyere na ndị edemede nke ngwanrọ n'efu chọrọ ịmanye ha iji ihe ọhụrụ ahụ eme naanị. Nke ahụ bụ nzuzu. Ọ bụrụ na sọftụwia na-amasị gị, jiri ya, ọ bụrụ na ọ bụghị, jiri ihe ọzọ. Kedu ihe kpatara nke a ji sie ike nghọta maka ọtụtụ ndị ọkpọ Linux? Enweghị m elo ọ bụla. Ka o sina dị, ọ na-akawanye mma, yabụ enwere olile anya. N'oge a ndị mmadụ nwere ike ịjụ ajụjụ gbasara ọrụ gbasara KDE na mkpokọta linux n'ozuzu wee nweta, nke ọma, azịza ọrụ teknụzụ kama ire ọkụ. Onwe m, anaghị m agụ akwụkwọ akụkọ Linux. Ezigbo mmepe ma ọ bụ nkwado onye ọrụ na - eme na listi nzipu ozi nke na - enye akara ngosi / mkpọtụ ka mma.
Site na 98 rue ụbọchị a ọnọdụ ahụ agbanweela nke ukwuu, na ndị mmepe maka KDE, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ maka Qt, aghọwo ihe dị egwu kemgbe afọ ole na ole ugbu a. Ọ bụ eziokwu na ihe agbanweela na Mkpesa nke ndị mmepe gtk nwere ike ịdị irè, mana taa, ọ bụ ezie na ọ bụghị agha, ọtụtụ ndị na-emepe gtk na mpụga na-eme mkpọtụ nke ukwuu megide gtk.
Linux enweghi otutu ihe mana m ka na eji ya
Linux bụ maka sava nke kpatara ọdịda nke Desktọpụ ahụ
Linux bụ isi nke sistemụ ahụ, ma enwere nkesa ndị gbakwasara sava yana kwa na desktọọpụ (dịka ọmụmaatụ Ubuntu kpọrọ asị). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile emere na Linux bụ ekele maka mmekorita nke ọtụtụ puku ndị ọrụ obodo, na onye ọ bụla nwere ike inye aka, yabụ karịa ime mkpesa, ihe ị kwesịrị ime bụ ịnwa ịmezi ya (na ịgaghị abụ onye mmemme, ị nwere ike ịmekọrịta na otu puku ụzọ, dịka ọmụmaatụ site na ịhapụ onyinye ma ọ bụ hapụ "ntụnye" ndị a na weebụsaịtị ngo. Ee, enwere ike imezi Linux, mana azịza ya abụghị itinye ha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ kwuo na ihe niile sitere na Windows na Mac ka mma (nke a na-ewere maka ya, ma ọ bụghị na a gaghị akwụ ha ụgwọ ma ọ dị oke ọnụ).
Naanị na post a anaghị m acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ha, ọ bụrụ na m chọrọ ịgba ndụ Linux, agara m ewere ihe ndị ọzọ m họọrọ ịghara ikwu maka ha adịghị mkpa.
OS X bụ ihe jọgburu onwe ya nke m hụworo site n'ebe dị anya, ọ naghịdị amasị m ịkpọ oku mara mma, ọ dị oke "nzuzu", ọbụghị n'ụdị mkparị, mana nke ahụ bụ eziokwu, enweela m MBP ma ọ dị ụbọchị ise kachasị njọ nke ndụ m, emesiri m OS X na Lappie nke abụọ nke m nwere ebe ahụ (ọ bụrụ hackintosh) nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu njirimara dịka MBP nke oge ya, ekwuru m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihi na ọ ka mma hahaha, na ọ dị mma nke ahụ jọgburu onwe ya Sistemụ arụmọrụ nke na m wepụrụ ya ma ugbu a ọ dị na Windows 8 ma ọ dị mma n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na bullshit naanị na-amata 256 nke nchekwa vidiyo kama 512, mana hey, ọ bụ lappie nke abụọ.
Ma ihe ị na-ekwu banyere ndị egwuregwu n'ihi na iTunes bụ nke kachasị njọ n'ihi na achọrọ m ebe ahụ, ọ bụ karịa ekele maka mmemme ahụ na ndị ọzọ bụ na m kpọrọ Apple asị mana hey ga-enwerịrị ya arụnyere iji iPhone m, n'ọnọdụ ọ bụla Winamp otu puku oge kachasị mma, dị mfe ma baa uru karịa ihe ahụ, na Linux echetara m iji Gee ntị nke ukwuu, dị ezigbo mma n'agbanyeghị eziokwu ahụ dịka Linux prog nọ na beta wee daa jọrọ njọ, enwere olile anya na ha edozila nsogbu ahụ.
Ma nke ahụ bụ ihe ngọpụ gị maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ọdịyo n'ihi na ekwenyeghị m ma ọlị, enwere olile anya na ị ga-akọwakwu ihe na ngalaba ahụ, n'ihi na ndekọ ndekọ enweghị nsogbu ọ bụla kemgbe Windows 3.1 hahahaha na enweghị isi na-ekwu ime nkuzi na ihe ndị ọzọ.
N'ezie anaghị m ahụ ihe mere iji wụnye na OS, ma ọ bụ na-egwu, ọ bụ karịa ma ọ bụ n'ihi na ọ dị mma, ma ọ dị mma onye ọ bụla na ya akụkọ, nri? Enwere m Windows arụnyere na igwe m niile, enwere m mbadamba nwere gam akporo, 2 iPhones na ekwentị ndị ọzọ nwere gam akporo, enwere m ike ịzụta otu obere PC ndị ahụ na gam akporo ebe ha dọbara uche m, yabụ na abụghị m fanboy, m na-eme Windows otu puku ugboro na desktọọpụ na Linux na sava, ọ bụ ezie na ha ka bụ isi ọwụwa hahahaha, ekele.
nke ọma, anyị amaraworị na ị hụrụ windo n'anya, ekele, agaghị m eji windo 8 ma ọ bụ nyefee (yana m ka nwere ikikere mbụ m maka mmemme ndị mmepe microsoft). Ọ bụrụ otu a obi na-adị gị ezigbo mma.
Ebe obu na enweghi m obi m ga-arutu ugbua nihi na amarala m gi, ebe m hapuru gi.
Ọ dịghị ihe dị n ’ụwa dị egwu karịa ezigbo nghọta na nzuzu.
Ahhh nke ziri ezi na ị bụ otu n’ime ndị ọkachamara kọmputa nọ n ’ebe ahụ, ị ​​ga-arịọ m mgbaghara hahahahaha, Agaghị m ekwu okwu na post gị ọzọ, maka otu ihe ahụ, ama m gị. (ekele maka ichetara m)
+1 udo na Republic.
na-eburu n'uche na obodo hackintosh bụ obodo nke na-arụ ọrụ n'okpuru mmụọ emeghe na tonymac na-arụ ọrụ nke ndị ọzọ iji tinye ha na obere mmemme ha na-enweghị ịhapụ koodu isi, ma na-enweta ego na ngwaike na-egosi ebe ahụ, njikọ a Agaghị m apụta n'akụkụ ebe a.
Pffta amaghi m etu i gesi ejide onwe gi compadre …….
Amaghịdị m otú o si eme ya, mana ọ ka na-eme mkpesa.
Elio Echeghị m na onye ọ bụla maara, mana hey ihe ọ bụ, ọ bụ ụdị Apple fanboy.
O doro anya na, n'ezie, ị maghị otú ị ga-esi jiri alsa, pulseaudio, ihe nhazi nke egwuregwu ọ bụla ị nwere ike ịzụta site na Steam maka Ubuntu Mint wee hụ ma kaadị vidiyo ma ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala ya ọ na-arụ ọrụ nke ọma na OpenGL (na OSX fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) a na-edozi ihe niile site na ngwaike ngwaike ọ na-eweta, mana na GNU / Linux, BSD na ndị nrụpụta, akụkụ ahụ ga-edozi nke ọma, ma ọ bụrụ na ha sitere na NVIDIA na ATI / AMD ndị na-achọghị inye nkwado ka mma maka GNU / Linux).
Kedu ihe ọzọ, Debian Stable dị m ka ọ dị mfe ijikwa na GNOME 3.4 ọdịda karịa OSX na interface Aqua.
Eziokwu bụ na m kacha nkasi obi na nke mara mma interface nke m ji mee ihe bụ Gnome, ahaziri ya na compiz na emerald skins a mma, egwuregwu nke ọma na Mmanya mba ọzọ, mba? Ọ bụ ezie na ndị na-egwu mines na egwuregwu ndị yiri ya na-atọ m ụtọ karị.
Ọfọn, Steam na-amasị m tupu mụ na GNU na Tetris minesweepers.
Agbalịrị m OpenBSD na eziokwu bụ na ọ bụ eziokwu yiri eluigwe na ala n'etiti GNU / Linux na UNIX. Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na otu n’ime ụbọchị ndị a ka m budata Solaris site na saịtị Oracle ma nye ya uto.
Banyere Windows, enwere m ike ịsị na ọtụtụ ndị ọrụ PC na-eji ya ebe ọ bụ na Microsoft na-eweta ndị nrụpụta itinye ya ma ọ bụ na ha "ga-efu ego ha" (Atụmatụ nke John D. Rockefeller kere maka M $), mana obere Too ọjọọ Cannonical na-agbanwe usoro ahụ na Ubuntu (ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị mma, ọ bụ ya kachasị ewu ewu).
Ekwenyere m kpamkpam na ị na-eji OS X dịka ọ bụ mkpebi gị.
Enweghị m ike ịza ajụjụ na isi 1 n'ihi na anaghị m ede ederede mkpụrụ edemede, mana a ga-enwerịrị azịza.
Isi nke 2 anaghị emetụta m, naanị m na-eji onye ọkpụkpọ egwu gee ntị na egwu m nwere na diski ike, m dị mfe. Oge ụfọdụ gara aga m nwara otu akpọrọ Musique nke dị mma ọ bụ ezie na ọnweghị oke nhọrọ ị kwuru
Ọ dị m ka na Libreoffice interface chọrọ mgbanwe interface, mana ọ dị mkpa iji melite arụmọrụ (nke m hụworo ka ọ meziwanye n'oge na-adịbeghị anya) na ndakọrịta.
Banyere Wayland na ụda na Linux, ekwere m ya; Enwere m ike iji Pulseaudio na m na-aga ALSA.
aaahh agụọlarị m nkọwa niile na ama m na pandev enweghị coppers hehe, ọ bụ agadi nwoke ọchị, echere m na ị ga-ewere osX dị ka onye ọzọ distro, ma ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka maka ihe ị chọrọ n'oge ọ bụghị mkpebi gị dị njọ. Ma gini kpatara m ji ede ihe na kọmpụta ọrụ, ọ dị mma!
ehehe exactly XD
uff m iTunes m na-ahụ ya jọgburu ma na okwu nke oriri na n'ihi ngafe arụmọrụ. n'ezie achọtabeghị m otu ọkpụkpọ egwu na Linux nke ọ na-adị m mma 100% (ọ dị nwute na abụ m foobar boy). lee anya, a ghaghi m gbaliri ihe karịrị iri abụọ.
Agbanyeghị, na interface bụ ọzọ ma ọ bụ na-erughị mara mma ọ dịghị mkpa n'ihi na m na-mgbe niile na-ebelata mgbe m na-arụ ọrụ, na-agagharị, egwu ma ọ bụ ihe ọ bụla.
deadbeef dị oke mma, ọbụnakwa nwee otu nhazi ahụ dị ka foobar (SuperEQ) mana enweghị onye nyocha faịlụ dị ka iri nri. audacious dị ezigbo mma n'ozuzu mana nhazi adịghị ka ọ dị ebe ahụ, amarok na-eri m 500mb ebule naanị ịmalite wdg wdg wdg.
Banyere egwuregwu, enwere m ya doro anya: windo nkebi na ihe ọ bụla m na-egwu n'oge ahụ yana ụfọdụ ngwa nke m na-ahụghị ezigbo nnọchi na debian ma na-agba ọsọ 🙂
Zaghachi ka xarlieb
O doro anya na Amarok bụ iTunes site na GNU / Linux (site na KDE ka ọ bụrụ nke ziri ezi). Na Audacious, enweghị m nsogbu, ebe o nwere isi ihe ọkpụkpọ ọdịyo, mana ọ naghị atụle etu VLC Media Player dịruru ukwuu.
Na oriri, nke a na-erepịakwa na pc m
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Hahahahaha nke ukwuu? na n'efu? weinamp na desktọọpụ PC m dị na megabytes asatọ, yana na laptọọpụ m o ruru opekata mpe nke 8 n'ihi na ọ na-ebu ọtụtụ egwu hahahahahahaha, hurray for iTunes !!!!
Ọ naghị ekwu banyere iTunes, ọ na-ekwu maka cpu, ebe nchekwa, dị ka a ga - asị na ọ chọrọ iri megabytes 500.
na winamp bụ ugliest player m hụtụrụla, ka mma media enwe maka windo.
JAjajajaja mana ị nwere ike ịgbanwe skins, tinye DSPs, gbakwunye ndị nhazi, ndị na-ekiri ya na ogologo wdg na nbudata gị na-atụle naanị megabytes 16 n'ọtụtụ, kama iTunes 90 megabytes kachasị? Echefuru m ma ọ na-aga ebe ahụ? Na itinye ihe ndị ahụ niile (DSP, skins, wdg) ịghara ịkọwa, iTunes na ngwa Apple dum bụ ezigbo ihe arụ, na-asọ oyi ma na-eto eto.
Winamp jọgburu onwe ya, aesthetics ya dị "archaic" (ọ bụrụ na ị nwere ike ịsị nke ahụ) na mgbe m jiri ya teeeeeeeeempo gara aga ọ nyere m ọtụtụ njehie dịka hangs, enweghị ụda ma ọ bụ ihe ndị dị ka nke ahụ, naanị ihe m matara bụ na na kọmputa ndị nke ochie na-arụ ọrụ ya nke ọma (ịgụtaghị mmejọ nke mmemme ahụ mgbe ụfọdụ nyere) mana afọ ole na ole ahụbeghị m kọmputa nwere ihe na-erughị 2GB RAM.
Ọ dịkarịa ala na Winamp ị nwere uru nke inwe ike ịmekọrịta egwu gị na ngwaọrụ gam akporo na ụzọ kachasị mma, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezie na usoro ndabara ya ugbu a a na-akpọ Bento na-asọ oyi maka ọtụtụ (n'echiche m ọ bụ facelift ka interface «kpochapụwo» na «Oge a»), ị nwere ike ile anya na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ka ị nwee ike ịhọrọ skins na-e mimomi iTunes (M gbalịrị ya, m nwere ike ịsị na iTunes maka Windows na-eripịa akụ karịa Winamp na-erepịa ihe na a "Oge a na akpụkpọ").
N'ihe banyere nsụgharị nke 3, ọtụtụ akwụsịla iji Winamp n'ihi ọtụtụ enweghị nkwekọrịta, yabụ ha kpebiri ịzọpụta atụmatụ nke nsụgharị 1 na 2 ma jikọta ha na nke atọ, wee hapụ nke 3 (nke ugbu a bụ 5 X ma ọ bụ kwụsie ike karịa ka ọ dị na mbụ ma ha kwụsịrị ịhapụ mpịgharị nke na-ewe iwe).
Versiondị nke n'onwe ya bụ ịkwa ákwá bụ ụdị nke ha wepụtara maka OSX, nke dabere kpamkpam na iTunes iji nwee ike ịmekọrịta listi ọkpụkpọ na egwu gị na gam akporo gị, ọ naghị enye gị nhọrọ ịnụ ụtọ Shoutcast dị ka gị onye ọzọ maka Windows.
Ọ bụ na ụdị maka osx ... ọ bụ egwuregwu, ha wepụtara ya n'ihi na ha nwere oge n'efu, mana ọkpụkpọ ọ bụla ka nke ahụ mma.
Banyere mmekọrịta nke android .., n'ihi na ọ bụghị na m na-eche ọtụtụ ihe banyere eziokwu, echeghị m na m ga-azụta otu.
Eziokwu bụ na enwere m obere oge iji ya na hackintosh m, n'ezie, ọ na-esiri ike ịgbanye laptọọpụ ahụ n'ihi na otu OS ahụ abaghị uru, mana n'eziokwu, ọ dị m ka m nwere uru dị na sistemụ faịlụ ahụ. nke otu sistemụ ahụ (maka egwu egwu), na nke ahụ bụ uru nke * nix nwere karịa Windows, NTFS, agbanyeghị etu ọ dị ugbu a, nọ n'azụ ndị ọzọ, mana site n'ebe ahụ… iTunes abụghị ma ọlị na-amasị m, karịsịa nke kachasị ọhụrụ, na-arịwanye elu ma na-agwụ ike, na Winamp m na-adọkpụ ma ọ bụ pịa ngbanwe + tinye ka e wee tinye egwu ahụ na listi ọkpụkpọ, otu usoro ahụ na-akpọ m egwu ahụ na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ha enweghị aha ihe na iTunes na-achọ na songs e encoded na a usoro na ọ bụ ogologo wdg na…. dị mma maka M ọ bụ ihe nzuzu.
N'ọnọdụ ọ bụla, maka windo m na-akwado foobar, ọ nwere ụda kachasị mma (nke hydrogenaudio gosipụtara ..), na adịghị mma mara mma akpụkpọ anụ n'ebe ahụ, gbakwunyere m na ọ bụ sọftụwia n'efu.
@Elio amaghi m ihe mere iji nye m aro ka m yiri akpụkpọ yiri iTunes, akpọrọ m ihe asị na apụl, achọghị m ịma maka mmekọrịta, a bụ m otu n'ime ndị na-eji ihe ọkpụkpọ egwu naanị iji egwu (kwesiri ka a gbanwee ya) , the Android Winamp I also find it atrocious, M na-ahọrọ onye na-abịa na ndabara.
Naanị m mere aro maka akpụkpọ maka Winamp. Agbanyeghị, Winamp bụ ihe ọkpụkpọ m na-eji maka ọdịyo nke SHOUTCast na-enye ma mee listi ọkpụkpọ nke m ma mekọrịta ha na ama gam akporo m na ọba. Ka o sina dị, Winamp emeela ka ọ dị mma, mana m ga-asị na na OSX o kwesịrị inwe otu ọrụ dịka ibe ya maka Windows.
Ka anyị hụ, ka anyị gaa n'akụkụ
Ihe mbụ bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ iji Windows, ma ọ bụ Mac, ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ịchọrọ, ọ bụ mkpebi gị, dị ezigbo mma ma kwanyere ya ùgwù. Agbanyeghị, echeghị m na ị kwuo, mgbe ịdechara isiokwu Linux na saịtị gbakwasara ndị ọrụ Linux "hey, Linux bụ ihe a na nke a" site na sistemụ arụmọrụ ọzọ. Bụrụ akụkụ nke ngwọta ọ bụghị nke nsogbu ahụ.
Nke abụọ metụtara ọdịnaya nke edemede gị. Ọ bụ eziokwu na Linux kọrọ a looooong ụzọ a ga-atụle ezigbo. Otú ọ dị, e nweela ọganihu. Na otutu. Anọwo m na-eji Ubuntu maka afọ 7, mgbanwe ndị ahụ adịwokwa ọtụtụ. Ọ dịtụghị mgbe m chere na m nwere ike ịnwe Steam, yana egwuregwu egwuregwu maka Linux, mgbe m malitere iji ya. Na mbido enwere m nsogbu na ihe niile, gburugburu na-ada, enweghị m ike igwu nwayọ ma ijikọ na ịntanetị bụ ihe ịma aka. Y’oburu n’icho ihe, ihe gasi na ugbua bu ihe.
Anaghị m ekwu na ị ga-eleghara anya wee leghara nsogbu ndị a gosipụtara anya, na ha dị irè ma na ha dị adị. Ma tụleekwa ókè ị rutere ma mara mgbanwe ahụ.
N'ikpeazụ, post gị yiri ka ọ bụ ọkọlọtọ abụọ. Say sị na 'Linux dị njọ, o nwere ihe ọjọọ ndị a. M gbanwere OSX, ọ na-arụ ọrụ nke ọma MA LINUX B B B »mma». Ọ bụrụ na ị kwuo nke a, m na-aguputa, "GNU / Linux dị elu karịa", gịnị kpatara na ị nọrọghị?
Nke ahụ. Cheers!
Zaghachi Pablo N.
Ihe mbụ bụ na m ka na-ahụ ya ọchị na ndị mmadụ anaghị enyocha ihe mmadụ dere nke ọma wee hapụ obodo atọ ma ọ bụ anọ n’ime ihe mmadụ chọrọ ikwu. Nkebi site na nkebi:
1 - Ekwesighi ịmata ihe dị mma ugbu a, ebe ọ bụ na ọ dịla mma, ihe dị mkpa bụ ịhụ ihe adịghị mma ma ghọta na a ga-agbanwe ya ebe ọ bụ na ha bụ ihe eji eme ihe. Ọ bụrụ na achọrọ m ịdọrọ ihe ọjọọ na Linux, agara m ekwu maka ihe ndị ọzọ achọghị m imetụ aka, ebe ọ bụ na ha anaghị ewuli elu ọ bụla-
2- O zuru ezu ịbụ ndị na-ekwenye ekwenye.
3- Nope, ekwughi m na Linux hiere ụzọ, ekwuru m na ihe ndị ahụ na Linux adịghị mma :). Ọ bụghị otu ihe ịsị Spain dị njọ, karịa ịsị na obodo dị na Spain adịghị mma.
4- Echere m na m kwuru n'ụzọ doro anya na m na-akpọ oku ọrụ ojii ops, usoro 1 2012 na Counter iku ụwa iwe na ọ bụ ya mere m ji na mac osx ...
5- Ike gwụrụ gị nke ndị mmadụ ịgụ isiokwu ndị dị oke mkpa, nsị na ezé ha.
Ndị nkwekọ? conformism na-enwe olile anya na a ga-eto gị maka iji sistemụ ahụ, ihe kwekọrọ na ya bụ, enweghị m ike ịnya ndị ọkwọ ọdịyo ma achọrọ m igwu obere egwuregwu ... ọ bụ ya mere m ji gbanye OS X n'ihi na m kpọrọ Windows asị , mgbe n’ezie, post gị kwesịrị ịbụ: Otu esi etinye egwuregwu na Linux na Steam, PlayOnLinux, Wine ma ọ bụ ihe dịka Crossover (nke a na-akwụ ụgwọ na m ji ya), na ọkwa ọzọ nke ị na - egosi nsogbu ị na - eche ihu na ndị ọkwọ ụgbọala na - ada ụda. , nke ị ga - enwe ọtụtụ nzaghachi (nzaghachi) site na ndị ọrụ Linux.
Obu na ikwughi na agaghi ede ihe ozo? 🙂
HAhaha ma ọ dịkarịa ala ọ bụghị na post gị, mana hey bụ na mmadụ enweghị ike ịkwụsị ịchọ osisi, na ị bụ nwa furu efu, omume gị bụ nke nwatakịrị nọ n'okpuru afọ 15 ma dịkwa oke egwu, iji bulie ya elu, ịnọghị ebe ahụ gị onwe gị na-emegide ya, ị na-ekwu okwu ọjọọ nke onye "na-eji koodu efu" mana agbanyeghị na ị na-eji sistemụ arụmọrụ nke na-ejighị sọftụwia na-akwụghị ụgwọ mana mana ewezuga ịhapụ ịhapụ otu iwe nke ngwanrọ ha chọrọ ka ọ dabara nke ihe ndị ọzọ, echetakwa na ụfọdụ akụkụ nke HTML 5 kwuru na ha (dịka ọ dị) na ha bụ "ihe onwunwe" nke ọma, na "ụlọ ọrụ" adịkwaghị.
Bịanụ, kwụsị ịdị ka nke ahụ, ọ bụrụ na 92 ​​bụ maka afọ amụrụ gị yabụ na adabaghị m ya? tozuo oke ma ghọta ihe ị na-ekwu ma na-eme, ọ bụ ezigbo ndụmọdụ.
ee eeh mma, :), ka mma jekwuoro nne gị, ọ ga-ege gị ntị :), ma ọ bụrụ na oge ahụ abịa mgbe a machibidoro gị iwu site na ịga n'ihu na-aga n'ihu, emela mkpesa.
Hahahaha na opekata mpe otu ihe doro anya na enwere m nne hahahahaha (ị kwuru…, amam ụdị agụmakwụkwọ ị nwere, ndị dara ogbenye)
Na Internet jargon, otu ihe ma ọ bụ trol1 na-akọwa onye na-ezigara ozi mkpasu iwe, na-enweghị isi, ma ọ bụ na-enweghị isi na mpaghara ịntanetị, dị ka mkparịta ụka, mkparịta ụka, ma ọ bụ blog, na ebumnuche bụ isi nke ịkpasu iwe ma ọ bụ iwe. nzaghachi na ndị ọrụ na ndị na - agụ akwụkwọ, nwere ebumnuche dịgasị iche iche ma na - atọ ọchị2 ma ọ bụ, n’ụzọ ọzọ, na-agbanwe mkparịta ụka nkịtị na isiokwu mkparịta ụka, na-eme ka ndị ọrụ ahụ were iwe ma na-eche ibe ha ihu. dị ka enweghị nkwanye ùgwù, mmejọ, ụgha siri ike ịchọpụta, n'ebumnuche nke mgbagwoju anya na ịkpasu ndị ọzọ iwe.
= ị bụ otu
Na intaneti jargon ... hahaha, o furu gị nnukwu ihe iji nweta nke ahụ na wikipedia? ka obu geekpedia? hahahahaha, nye ya nwa nwoke, kedu oge m gbanwere isiokwu a? Abanyela m iji gbazie gị, mana dịka nwatakịrị na-adọrọ adọrọ ị chọghị ịmụ, ngụkọta ị bụ troll nke blọọgụ a n'ihi na ọ bụ blog LINUX ọ bụghị ya: Maka na m gbanwere OS X, debe nke ahụ maka gị na ọ dịghị onye na-eche, mụta site na nkatọ bara uru, ọ ga-enyere gị aka na ndụ, ma kwụsị igwu egwu na ị bụghị.
Enwere m chipset nke @ pandev92 na-eji, amalitere m igwu egwu na alsa n'ihi na agbanyụrụ ụda ahụ mgbe m meghere Ardor na ALSA ma bidogharịa ihe niile edozi ma ọ kụrụ ụda ọzọ. Nweghị ike ị nweta enyemaka naanị ịpịnye "alsa" n'ime njikwa ma hụ nhọrọ ọ na - enye gị?
Onye na-eso ya, nweta ya.
Enwere m nnwere onwe nke GNU / Linux na-enye 🙂
iTunes bu ihe egwu.
nke ọma, ha bụ ụzọ nke ịhụ ihe, mgbe m jiri ya na windo ekwere m otu ahụ, ugbu a ka m jiri ya na osx, n'ihi na echiche m agbanweela.
Anaghị m ahụ ihe dị iche na Windows na OS X eziokwu.
Na arụmọrụ ọ nwere nnukwu ọdịiche, ọ bụkwa ihe a na-akọ na ole na ole forums eziokwu :).
Hahahaha na kedụ arụmọrụ onye ọkpọ egwu nwere ike ịnye mgbe ahụ? na oge ọ na-ewe iji buru ibu? na oriri gị? otu ọsịsọ ị na-achọ egwu kachasị amasị gị? hahahahaha, ọ dị mma maka ọchụchọ egwu m kwenyere na gị, chọọ ngwa ngwa, n'ihi na ewezuga nke ahụ, ọ na-eme nchekwa data ya nke buru ibu, na isi ihe ndị ọzọ…. onwere ugbua ka nma ndi n’eme nke ahu, dika m gwala gi banyere Linux iju Listen, ngwa ngwa, oku, bara uru…. agbanyeghị.
ihe arụmọrụ? mmalite oge, oge na-agagharị n'etiti mkpuchi, akwụkwọ mpịakọta egwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mana gịnị ka ị ga-amata :).
JAjajajajaaaaaa Amaara m karịa nwa gị nke ahụ bụ eziokwu, na onye ọ bụla ọzọ batara na saịtị a ịza ajụjụ, oke njọ ị kwenyere nke ukwuu mgbe ị na-enweghị ihe ọ bụla, ọ bụ ya mere ị ji nọrọ na OS X sistemụ arụmọrụ maka ndị nwere uche adịghị arụ dị ka gị .
iTunes maka Windows nwere ebe nchekwa nke ara nke m anaghị eji ya emelite iOS ndị dị na iPod Touch na iPhones. Dị ka onye ọkpụkpọ egwu na sistemụ Redmond ọ bụ ịkwa ákwá, mana maka Mac, ọ bụ naanị "nnukwu" ebe ọ bụ na ọ na-eji usoro Cocoa wee nwee ọdịiche dị njọ n'etiti ụdị Windows na nke Mac.
N'etiti QuickTime na VLC, m na-ahọrọ VLC (ezigbo mgbasa ozi mgbasa ozi) maka mma ya na ike igwu egwu usoro mgbasa ozi dị iche iche achọtara na ntanetị niile. Anaghị m eji QuickTime arụ ọrụ na Adobe Premiere na After Effects.
Isi ihe dị iche n'etiti OSX na Windows NT 5.X / 6.X bụ na, na OSX, ị nwere ike idetuo folda niile nke mmemme arụnyere n'otu oge, yana aha njirimara na igodo ngwaahịa gụnyere. N'aka nke ọzọ, na Windows, ịnwere nchekwa nke dabere na ọba akwụkwọ ndekọ ọ nwere, n'ihi na ọbụlagodi na ị na-eme mediocre copypasta, ụdị mmemme a agaghị arụ ọrụ yana opekata mpe ị nwere nchekwa nke Suite gị Agaghi e beomi ihe oyuyo dika nke Adobe.
Otu nnukwu esemokwu dị ukwuu bụ na Microsoft dị nro dị nro na usoro o termsomi ya na nkesa, nke na-agba gị ume ịdabere na sistemụ karịa OSX, nke usoro ya na ọnọdụ ya bụ akwụkwọ ozi nwụrụ anwụ n'ọtụtụ mba, mana ha enweghị mfe nke nwụnye na Windows nwere na PC n'ihi na nke ọbara ya GUI.
Na usoro nke nkwụsi ike, ha abụọ nọ na par. Naanị Windows ka amaara maka ikiri ụkwụ Achilles site na isi ya ruo na mkpịsị ụkwụ ya naanị na OSX ka a na-eji ha ekwe ka malware banye ma dịka enwere ikpe ole na ole ị ga-efunahụ data dịka na Windows, ọ dịghị mkpa ịwụnye antimalware (na Linux Ọ dịghị mkpa ịwụnye antivirus dị ka nke ESET, ebe ọ bụ na nzaghachi maka ịba uru na-agba ọsọ karịa OSX na Windows).
Lee anya na eziokwu bụ na ọ dịtụghị mgbe m mere aghụghọ ahụ nke mpempe akwụkwọ nke OS X, mana ọfụfụ ahụ ị na-ehichapụ «ngwa» (nke m gụchara MAriCa iji rụtụ aka na mmemme) na ndekọ ngwa ngwa ma ọ bụ ya, n'ihi na mgbe m wụnye Final Cut na m emelitere ya n'ihi na ọ jụrụ m maka a nti ndekọ isi na ebe m na-enweghị m wee "iwepụ" laghachi mbụ version na ọ dịghị ihe ga-ekwe ka m reinstall n'ihi na e chere na ihe omume ahụ ka ebe ahụ, n'okwu ole na ole ezigbo chọrọ site na SO.
Ma antivirus, n'ihi na otu Apple «na-atụ aro» nnọọ obiọma oge ụfọdụ gara aga na AV arụnyere kemgbe: «Ọ bụghị usoro sistemụ niile anaghị enwe nje virus» hahahaha, yana ndụmọdụ ahụ adịkwaghị na saịtị gị maka na ha naanị enweworị ihe arụkọtara ọnụ AV akpọrọ xProtect na n'ezie mpako ha adịghị eduga ha ikweta na, ọ bụ? Kasị njọ bụ na ha anaghị eji ojiji nke ndị na-abụghị igbu egbu na DEP na ekele maka nke a enweghị nje na PC dị ka ndị dị otú ahụ, ma ugbu a, ọ dịkarịa ala ekele maka UEFI nke Linuxeros kpọrọ asị, mana hey nke ahụ bụ eziokwu, Apple bụ otu puku ugboro ka njọ karịa Microsoft ma ghara ikwu banyere ya Fans.
N'ezie, ọtụtụ mmemme Apple nwere arụmọrụ jọgburu onwe ha na interface ha, nke ọbụlagodi VLC, nke ejiri QT mee, karịrị ha (yabụ kpatara m ji akpọ ha "ngwa").
Agbanyeghị, kama OSX, a ga m eji obi ọmịiko gwa gị ka ị wụnye OpenBSD na KDE ka ị wee mata etu sistemu a siri dị karịa OSX.
Mhh @ eliotime3000, arụmọrụ enweghị ihe ọ bụla gbasara ya na aqua, n'ezie ngwa dịka mail, iwork, safari, aquamacs wdg. ha nwere ezigbo arụmọrụ, ma kama clementine na pc m crawls (ọ bụ na qt), na m nwere a dịtụ eleghara anya i5 3570k.
O doro anya na onye ọ bụla chọrọ iji osx, na-eji ya maka ihe dị iche iche site na onye ọrụ nwere ike mepee emeghe, yana ọtụtụ n'ime ihe kpatara ya nwere ike chịkọta ya na swiiti anya (nke dị iche iche), yana iji ụfọdụ ngwa dịka ms office, adobe photoshop, logic pro, ụlọ ọrụ ụgbọala (XDDD nke a bụ nke m na-eji) ma ọ bụ ngwa ahịa ọ bụla ọzọ.
O doro anya na ọ dịghị OS zuru oke, enwere OS nke na-ekpuchi profaịlụ njirimara dị iche iche na ọ nweghị ndị ọrụ ahụ dị njọ ma ọ bụ ka mma karịa nke ọzọ.
M kwuru okwu na saịtị a ma o doro anya na ehichapụ ¬¬
Ọfọn, izugbe aesthetics nke OS X bụ ihe magburu onwe ya, m ka na-enwe mmasị na minimalism nke Apple kọmputa ọ bụ ezie na amaara m na OS ya bụ chestnut. Anaghị m agbanwe site na GNU / LINUX ma ọ bụ na-egwu nke ahụ maka enwere consoles (na uzuoku) n'agbanyeghị na abụghị m onye egwuregwu na-ekwu. M ugbu a na-eji Trisquel 6.0 na mbụ 5.5 ihe karịrị otu afọ na a studio netbook Enwere m olileanya iji wụnye Elementary OS (beta 2) na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Banyere ndị egwuregwu n'ihi na enwere m mmasị na Egwu na Banshee ọ bụ ezie na nke ikpeazụ m kwụsịrị iji ya mee ihe maka nke mbụ. Ma ọ bụghị ya, enweghị m ike ịgwa gị.
Enweghị m ego m ga-eji na-egwu egwu na m ga-egwu 2 ma ọ bụ 3 ugboro n'izu xD otu ma ọ bụ awa abụọ—
N'ezie, kọmpụta ha bụ nke kachasị amasị m, taa ha wepụtara ọtụtụ kọmpụta ndị yiri ya maka euro 300/400 pere mpe karịa.
Banyere isi nke abụọ, amaghị m ma ọ bụrụ na ị jirila egwu (http://flavio.tordini.org/musique) ee ee ee ị na-ezo aka n'ụdị ihe a, egwu n'okwu fedora dị na nchekwa.
Zaghachi ka lewatoto
Egwu sitere na gnome na egwu sitere na elementrị ga-akawanye oge, ihe m chọrọ ka ọ dịkwa na linux bụ mmemme yiri codekit.
elementrị music bu nke m kacha masi na gtk mana o nwechaghi otutu ihe 🙂
Nightingale nwere SHOUTcast dị ka redio
Ọ ga-amasị m ịkọ ahụmahụ m. Anọ m na-eji Linux karịa 12 afọ na n'oge ahụ anaghị m eji ọzọ ma e wezụga Windows maka kpọmkwem ihe. Agabigala m n'ọtụtụ ọgba aghara na desktọọpụ. M na m kwenyere na m ga-anọnyere ụwa nnwere onwe ruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, anwalebeghị m Mac.
Na nso nso a (afọ 2 gara aga) M ji aka m raara onwe m nye mmepe iOS n'etiti ihe ndị ọzọ. Site na mbido m gbalịrị iji emulators na-agba MacOSX na Linux mana n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bụ enweghị ike iji ya. N'ikpeazụ enweghị m nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịzụta Mac Mini.
Eziokwu bu na odighi nso na Windows. Ọ nwere ọtụtụ nkwụsi ike karịa nke a. Maka Linuxero ọ dị mma karịa n'ihi na ị nwere ọnụ na bash, ịbụ UNIX na nkà ihe ọmụma nke faịlụ na sistemụ ahụ yiri.
Ma m ka na-atụ uche Linux. Isi nke nnwere onwe nke ịmara ihe na-eme na ihe kpatara ya n'akụkụ niile enweghị ọnụ ahịa nye m. Ee, Mac dị ezigbo mma ma kwụsie ike, ọ nwere ezigbo mmetụta na fluidity, ọ na-egbu maramara nke ukwuu, mana onye ọrụ enweghị mkpebi mgbe ọ na-ekpebi ihe ọ ga-eme na sistemụ ha. Ọ mara ezigbo mma ... ọ nwere ike ịbụ. Ekwenyere m na ịma mma bụ nke onwe ya na ndị na-enweghị mmasị na ọdịdị nke Mac anaghị ekwe ka ha gbanwee ọdịdị ya.
Na nkenke, echere m na ọ bụ ezigbo sistemụ arụmọrụ, na ị nwere ike ịrụ ọrụ ya nke ọma, na ọ naghị esiri ike imeghari ya ma ọ bụrụ na ị si na Linux, wdg ... mana ọ nweghị ihe dị mkpa nye m: Nnwere onwe.
Onyeikpe 8) dijo
Nke a bụ nkuzi banyere otu esi edekọ ọdịyo nke igwe gị. 😉
Salu2 nke Jizọs 8)
Zaghachi jEsuSdA 8)
Banyere libreoffice, ọ bụ eziokwu na ọ chọrọ mmelite interface, mana ọ dabara nke ọma na ha na-arụ ọrụ na ya.
Ihe v. 4.1 ga-abịa na sidebar (ọ bụ ezie na anaghị arụ ọrụ na ndabara echere m):
Na mgbakwunye, ha ga-agbanwe na ụdị na-esote ma ọ bụ na nke na-esote akara ngosi dị na ndabara maka ọtụtụ ndị mara mma:
Banyere calc, ọ dị ka nnukwu ọganiihu a na - emekwa ya na ya:
Ọ bụ ihe m na-ekwu ọtụtụ oge, Linux na-emeziwanye kwa ụbọchị, ihe ị ga-ahụ n’ọnwa ọzọ nwere ike ọ gaghị enwe ihe ọ bụla jikọrọ anyị nwere taa. Enwere ọtụtụ ndị ka na-eche na sistemụ arụmọrụ Linux dị ka ha dị 10 ma ọ bụ 15 afọ gara aga.
ihe oyiyi yiri ka faenza nke biputere ebe a (https://blog.desdelinux.net/faenza-iconos-para-libreoffice-4-0-0/), nke m jiri n'ihi na ha dị mma ... Echere m na ụzọ LibreOffice na-agbaso dị mma, ebe ọ bụ na ọ dịkarịa ala na imewe ọ jọgburu onwe ya (ọ bụghị ikwu na ọ bụ ezie na ya na Office 2003 dị mma, ọ ka na-enweghị nke 2007 na nke dị elu, na ụdị ọhụrụ ndị ahụ dabere na XML pụtara ogologo oge gara aga), ma gbakwunye na otu o si dị na KDE
Ọ bụrụ na ha yiri oke zuru oke, ọ dịka ọ dị ugbu a ụdị ụdị a abụrụla nke ejiji, ma ode akwụkwọ nke faenza-libreoffice na esokwa ndị ọhụrụ a na-emekọrịta ihe.
Na nsogbu abụghị na MS na-eme ihe niile enwere ike maka na Office ya adabaghị na Openoffice ma ọ bụ Libreoffice? Ozugbo Libreoffice dakọtara na Office 2007 na 2010, ka anyị hụ ogologo oge ọ ga-ewe iji gbanwee usoro ahụ ọzọ.
Enweghị ihe ọ bụla, ụdị oxml na-emeghe ..., nsogbu bụ na m tụbara onwe m ogologo oge gara aga, ebe m maara na ọ siri ike itinye ha n'ọrụ.
Banyere ojiji nke OSX86 nke @ pandev92 na-eji, ekwesịrị m ikwu ihe ndị a:
M arụnyere na iAtkos 7 na m ochie na ahụhụ 1st PC ibe. ọgbọ, nke gbara ọsọ na OSX Leopard installer na-enweghị nsogbu. Mana mgbe etinyere sistemu ahụ, ọ were otu narị afọ ka interface mmiri ahụ wee na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike imepe aqua interface nke OSX installer nwere naanị ọnụọgụ 32MB vidiyo na elu nke vidiyo ahụ sitere na S3, gịnị kpatara interface ahụ ejighị na mberede mgbe etinyegoro ya?
Mgbe m mechara nyocha, ọ tụrụ m n'anya na achọrọ ihe dị ka vidiyo 256 MB maka OSX interface ka ọ na-agba ọsọ (okpukpu abụọ karịa Aero interface nke Windows Vista / 7), ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na mberede nke ihe oriri mgbe eji ihe ọkpụkpọ ọkụ mgbe ị na-ekiri vidio vidio YouTube, GUI yikarịrị ka ọ ga-adaba n'ụzọ ka njọ karịa Windows Aero n'onwe ya na Flash Player.
N'ihi ya, m kpebiri na m gaghị wụnye OSX na PC n'ihi ya ara video oriri na ya aqua interface, na m ga-anwale ya na "eke gburugburu ebe obibi" (naanị, ebe niile) ma si otú zere nsogbu.
Mmadụ, mana ihe nkịtị taa bụ na mmadụ nwere opekata mpe ihe ngosi 512 mb…, taa ọbụlagodi gt610 (poop poop poop poop card), ị nwere ike ibugharị gburugburu ebe aqua dị mfe.
Ikekwe pc ọ bụla nke euro 500/600, nwere arụmọrụ karịa mac mini ma ọ bụ imac nwere eserese intel ...
Ee, amaara m, mana n'oge ahụ, m ka na-eji Windows Vista Ultimate PC jumper maka INRI ọzọ, ọ jọkwara m njọ na ụdị ọsọ ịntanetị nke m nwere ... Ruo mgbe m nwetara ohere ibudata Debian Squeeze emesia m gabighara ihe nhụsianya ahụ, calender m a chụpụrụ na-adị ndụ na oke ọsọ ya, na site na m nọ na Debian Wheezy na Windows Vista nwere HP Workstation nke dị na ọnọdụ ka ọ ghara ịta ahụhụ dị ka PC ibe Nke mbu. ọgbọ.
Ka anyị hụ hackintosh m (ọ bụ?) HP DV6000 bụ C2D nke 2.1 4 na RAM na 512 na vidiyo GT 8800, etinyekwara m na desktọọpụ m bụ i7 nke 2.66 Ghz 12 na RAM 1 Gb video Nvidia 220 (ee ee ama m ama) na a huasa ego nke draịva siri ike, OS X rụrụ ọrụ maka m reeebien, ma maa ọ dịghị ihe m nwere ike ime na OS X na ọ bụghị na Windows otú ahụ ka m tufuo na sistemụ unyi, n'ihi na mgbe na-eme mmelite Ọzọkwa Ha bụ gigantic n'ihi na ọ na-aga ekwensu ọzọ anyị ga-etinyerịrị AMAOKWU iwu.
Ihe na-eju m anya Elio bụ na ị nweela ike ịwụnye sistemụ ahụ na igwe ahụ hehehehehe, echere m na ị ga-etinye otu narị pound nke ndị mmezi na mmalite.
IAtkos m na-eji enweworị nkwado maka ụdị isi ahụ. Ka o sina dị, etinyeghị m hackintosh ọzọ n'ihi nnukwu GUI ọ nwere (ọ bụrụ na achọrọ m GUI nke dị ezigbo mma, m ga-eji KDE na GNU / Linux na Aero na Windows Vista / 7).
Otu ọnwa gara aga, m nwalere MacBook ma achọpụtara m na iji mechie mmemme na OSX kpamkpam, m ga-eme CMD + X ka o wee mechie mmemme ahụ ma ghara irikwu RAM. Na mgbakwunye, enwere m ọghọm ịnwe mkpọchi bọtịnụ otu nwere adịghị ike nke ịpị aka nri na keyboard… Ọ dị m ka m furu efu karịa nne Marco mgbe m na-enweghị ike ịchọta igodo maka ụda olu na brackets na obliques (na nke ahụ dị n'asụsụ Spanish).
Olileanya OSX ga-emechi mmemme gị kpamkpam site na ịpị bọtịnụ mmechi uhie ma ghara ime CMD + X iji mechie usoro ọ bụla.
Ekwenyere m kpamkpam. Agbanyeghị na enwebeghị m nsogbu na pulseaudio (ngwaike ikekwe) enwebeghị m ike idekọ ụda dị n'ime na micro, na ịme pọdkastị na-egbu egbu.
Ọ ga-amasị m ịsị na mụ onwe m ezutewokwa ụfọdụ okwu m chere na ekwesịrị iburu n'uche:
- nsogbu mgbe ị na-agụ CD. Enwere m ha mgbe niile. Anaghị m ekwu maka CD ndị nwe ha (n'ụzọ dị ịtụnanya, ha na-adabara m nke ọma), m na-ekwu maka CD m jiri data m gbaa ọkụ (akwụkwọ, onyonyo, ihe nkiri…) Enwere m ha mgbe niile, n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkọta m wụnye, ọ dịghị mgbe ha na-apụ n'anya. N'ezie, ugbu a, m nọ na Windows iji nwee ike ịfefe ihe na DD m, n'ihi na ụnyaahụ m dara ada ọzọ mgbe m wụnye amaghị m ọtụtụ nchịkọta.
- nsogbu na wifi. Omuma. Ewezuga Ubuntu, nsogbu nile m gbalịrị nyere m nsogbu na nke a. Na kwa, a ugboro ugboro nsogbu: na Wi-Fi ọkwọ adịghị dị ndabara. N'ihi ya, anya ọma, ọ dịghị ihe na-eme. M na-aga nhọrọ nke distro ọ bụla iji wụnye ya, ebe a nsogbu na-amalite. Njehie mgbe nbudata ọkwọ ụgbọala, nsogbu nke agaghị ịchọta nchịkọta dị mkpa iji wụnye ya…. Kraist, amaghi m etu ha si eme ya, mana mgbe obula m wunye distro iji nwalee ya, ana m efunahụ awa abuo na nke a. O yighị m ka ọ dị mma na Ubuntu mere ka edozi ya ya na ọzọ na nsogbu niile, otu ihe ahụ na-eme ọtụtụ mmadụ.
-N'ihi na LibreOffice, nsogbu ndị na-abụghị nanị metụtara na interface. Ọ bụ na mgbe ị na-anwa ime ihe dị elu karịa akwụkwọ dị mfe nwere mgbatị ziri ezi, ọ na-amalite ida n'ụzọ dị ukwuu. Emechaala m nweta nnukwu mania naanị maka ọnụọgụgụ oge m kwụgidere mgbe m na-anwa ịnye usoro nhọrọ na dọkụmentị, ma ọ bụ na o mebiela usoro nke dọkụmentị naanị site na ịmepe ya.
Zaghachi León Ponce
Mhh banyere wifi, enwere m nsogbu nkwụsị nke wifi nke kwesiri ka dakọtara na Linux osx na windo, na njedebe m kpebiri itinye wep nche ..., wpa kpọgidere njikọ ahụ ...
Banyere CDs, naanị otu nsogbu m nwere bụ CD CD ndị Japan mbụ, nke ndị linux anaghị egosiputa mkpado ahụ, ka oge na-aga, achọpụtara m na ọ bụ maka ndị egwuregwu dịka itunes ma ọ bụ Windows Media Player, na-eji gracedb (nke bụ ikike, nchekwa data), ebe ndị ọzọ niile na-eji freedb, nke na-emeghe ma ọ bụghị dị ka nke mbụ.
Gracenote dị mma na Winamp, mana na Windows Media Player na iTunes ọ nweghị ike ịmata ọba site na ndị nka amaghi ama sitere na diski oghere. Ọ bụrụ na Gracenote wepụtara koodu isi ha ọ ga-adị mma, mana anaghị m ahụ na ha ga-eme ya maka ebumnuche ha na-akwụ ụgwọ (dị ka ọ dị na aha ndị Japan).
Mana ihe m na-aghọtaghị bụ ihe kpatara na ọkụ mmụọ anaghị ewepụta mbipụta vinyl mkpokọta nke ndị omenkà ha kachasị mma maka ahịa ọdịda anyanwụ, ebe ọ bụ na mbelata nke ndị na-eto eto na ala ndị Japan na ndị na-egwu egwu egwu nke Japan gara njem na ala ọdịda anyanwụ na-enwekarị mgbe ọ bụla.
Banyere CD ndị mbụ, enweghị m nsogbu ọ bụla yabụ anaghị m eme mkpesa banyere ya. Banyere WiFi, enweghị m nsogbu na TP-Link m, ọ dabara nke ọma na ọ nwere Altheros chipset nke ghọtara ya n'ụzọ zuru oke, ọ rụrụ ọrụ ebube.
Na akụkụ LibreOffice, ọ nwere ogologo ụzọ ọ ga - aga tupu ọ dakọtara OOXML n'ezie.
Achọpụtara m na ọ bụ ahụmịhe dị mma iji nwaa OS dị iche iche. Ejiri m CPM +, DOS, UNIX, Windows 3.1 / XP. Ọ dịtụghị mgbe m jiri MAC ma ọ bụ merie karịa XP (belụsọ ntakịrị Vista). Ọ bụrụ na mmadụ nwere ohere ịnwale ya ma nwee mmasị iji ya, ka ha mee ya ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji ya tụnyere Linux, m ga-amụta nke ọma!
Site na pc ndị ọrụ ụlọ ọrụ m zọpụtara, mụ na Puppy na Debian biri. Anaghị m egwu egwuregwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile m na-eme bụ sọfụ, enweghị m frills dịka 8GB nke RAM (nke kachasị ike bụ 512KB). Ya mere, ana m ekele ndị na-enyocha ihe n’azụ oke na enweghị m ike (na enweghị ebumnuche ịgafe) ha na-agwakwa m ya gbasara ụzọ ụtọ. Daalụ.
Ọ dị m ka ihe ngosi nke post gbasara SO dị njọ! M na-eji Debian Stable + Mate + Iceweasel (ọ bụrụ na Midori site na post gara aga ziri ezi).
ọla ndụ dijo
Nkatọ onwe onye maka gnu / linux adịghị arụ ọrụ. n'ihi gịnị? nanị n'ihi n'eziokwu na ọ bụ opensource / free software. Ọfụma na-enye / ohere iji sọftụwia na - enye gị ohere ọ bụrụ na ihe adịghị amasị gị, ọ bụrụ n’echiche na ihe ga - aka mma. Do na-eme ya na ị gbanwee koodu ahụ, ha anaghị enye gị koodu ahụ maka ihe ọ bụla, ọ na-agbanwekwa maka mkpa gị. Ma ọ bụrụ na ị ga - enye ihe kpatara ị jiri gbanwee apụl, hapụ ya ka ọ bụrụ nke bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ike gwụrụ m na Linux n'ihi na a na-eme ihe niile na njikwa ma ọ bụ ihe yiri ya. Ọbụna onye ọ bụla nweere onwe ya ịhọrọ OS masịrị ha mana anaghị abịa ngọpụ ndị na-enweghị isi, n’ezie.
N'ọnọdụ ọ bụla ị mejọrọ, site n'echiche gị, echiche ahụ metụtakwara mmemme freeware, ọ bụrụ na ịchọọghị ya, wee jiri nke ọzọ, ma ọ bụ laghachi n'eziokwu, ebe steeti na-enye gị karịa ihe ị na-akwụ ụtụ isi kwa afọ8 ahụike, agụmakwụkwọ, enyemaka ego, njem, mmezi okporo ụzọ), ị nweghị ike ime mkpesa ebe ọ bụ na ha na-enyekwu gị ...
Echiche ahụ enweghị ebe ọ bụla, otu ihe ahụ nwere ike ịsị na ndị mmadụ enweghị ike ime mkpesa banyere Microsoft Windows, n'ihi na ọtụtụ anaghị akwụ ụgwọ maka ya, ma ị nwere nnwere onwe iji ihe ọ bụla ọzọ, yana echiche ahụ ị na-eke "cosmic conformism"
Onweghi ihe dịka Debian Wheezy na Gnome-sheel na ndọtị NchNhr Ọnọdụ, Njirimara Onye ọrụ nyere site na Gnome-tweak (nke ndabara na Debian arụnyere) na Dash to Dock extension (https://extensions.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/) na-esote isiokwu Zoncolor (http://gnome-look.org/content/show.php/?content=156189) na Faenza na akara ngosi (http://faenza-icon-theme.googlecode.com/files/faenza-icon-theme_1.3.zip) ma ọ bụ ọhụrụ elementrị 3 (https://launchpad.net/elementaryicons/3.x/3.0/+download/elementary.tar.gz).
Ọ bụ reostia 😀
Ihe onyonyo a:
Maka ndị chọrọ ezigbo BSD ịwụnye wolves FreeBSD 😀
OpenBSD ka mma, n'ihi na malware na-enwu ọkụ enweghị ike ịbanye na sistemụ ahụ.
Ma nke a bụ otu nwoke ahụ na-achọghị ịmụ otu esi eji JACK na Pulseaudio, wụnye ya na sudo apt-wụnye pulseaudio-modul-jack modul ahụ iji mụta ụda nke kaadị dị n'ime yana JACK, gbaa IDJC, jikọọ Jack Jack PulseAudio Jack Sink na ntinye inyeaka ma ọ bụ na ntinye STR na QjackCtl (na gburugburu ebe obibi, ọ gaghị efu na njikwa ahụ) rụọ ọrụ igwe okwu na IDJC ma dekọọ ozugbo na flacc, ogg ma ọ bụ mp3 na IDJC Mmepụta ọdịyo nke usoro yana igwe okwu. Anọ m na nke a dị n'elu: ọ bụrụ na ịchọghị ịmụta iji Linux, ọ dị mfe ịghọ Apple fanboy zuru oke zụrụ iji pịa bọtịnụ na Aqua ma ọ bụ ihicha ihu na-ebe ákwá n'ihi na iTunes anaghị anabata kaadị onyinye ha nyere ya nnukwu ụlọ ahịa. Enwere uru ọ bụla na ọbụnadị ọmịiko.
A gwala m gị ugboro 4000 na m ji jaak na idjc, ọbụnakwa nweta enyemaka site na redio gnu, ma ọ gwụbeghị nke ọma, kedụ ka m ga-esi eji egwuregwu mee egwuregwu? Na na ndekọ ndekọ tebụl oge pịa? Don't maghị na kọmputa ga-arụrụ gị ọrụ ma ọ bụghị gị rụ ya?
Nsogbu ozo nke Jack nyere m bu na ihe obula m mere, aga m edeko okwu nke idjc mana n'otu oge ahu m gere nti onwe m, oburu na m mechie onu m ga-efunari olu nile, agaghi emeghe ya ozo ma obu onyinye.
Gaa ma tie mkpu na shelldon, na ọ ga-achọ ịme 4000 usoro, nke mere na ikekwe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ikekwe ọ bụghị, usoro gị.
Site n'ụzọ, ebe ị maara nke ọma, mee ka ibe a bụrụ nkuzi ebe ị na-edekọ ọdịyo nke pc na igwe okwu gị, ebe ị na-egwu egwuregwu uzuoku ọ bụla 😀, maka nerd dị ka gị, ọ gaghị esiri ike
Crybaby mana unu anwala. Enweela m usoro m ma abughi m otaku, ma ọ ga-abụ na ị ga-enwe obi ụtọ. Iji bụrụ onye na-enwu ọkụ na blog a, ị nwere anụ siri ike mgbe ha na-echetara gị ịdị umengwụ ịhazi, hapụ mmemme, mmemme ọ bụla na gburugburu ebe obibi. Amaghikwa m onye "shelldon" bu, ma obu ikwughachi ihe obula ugboro 4000, onye oku iberibe (ma o buru na m si "s00b" i nwere ike mara ihe m na-ekwu?
A na m agwa gị na ejirila m Linux, ndị ọkwọ ụgbọala ọdịyo, nhazi ọkwọ ụgbọala vidiyo, nchịkọta kernel, na mkpesa na-akọ akụkọ, yabụ kwụsị iberibe ma mee nkuzi iberibe ahụ, ọ bụrụ na ịmeghị m, m ga-ewere ya agaghị ekwe omume nakwa na ị na-ewepụta obi gị
Dị ka ụfọdụ ndị ọrụ na-eme, ị bụ ụdị na-ekwu, sị:
»Ọ dịghị ihe na-ada ada na Linux, ị bụ na na»
Na ekele maka ndị ọrụ nke caliber gị nke a anaghị aga n'ihu. Daalụ maka ichetara m.
Nke a bụ obodo, ị gaghị agafe onye editọ, ọ bụrụ na ị gwa onwe gị maara ihe, ị na-egosi anyị vidiyo na YouTube nke ị mere, nzọụkwụ site na otu esi ahazi idjc na jack, na-enweghị ige ntị na olu gị dị ka nloghachi. You gosi m otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ, jack na pulseaudio n'otu oge na recordmydesktop, nke mere na ngwa ọrụ a na-edekọ vidiyo na isi iyi abụọ, m ga-ewere eserese, ma ọ bụghị na m ga-akpọrọ gị maka "genti na ụtụisi "
Enwere m ọrụ ịkụziri otaku na-abaghị uru na-enweghị ike ịdekọ vidiyo ya banyere otu ọ si egwu obere egwuregwu ya. N'ezie, ọ bụ naanị gị kọọrọ m na ịnweghị ike iji IDJC na Jack na PulseAudio (na maka ndekọ na nkuzi ahụ dị na blọọgụ a yana na ntanetị nke m na ọtụtụ nleta) echeghị m, na obere n'ihi nke ụdị obiọma ị jụrụ m. Ikekwe ị bụ onye nzuzu dị ka ịnyịnya ibu na-achọ ịhazi otu nnukwu hok na eserese na / ma ọ bụ kaadị ọdịyo site na afọ iri gara aga ma họrọ ịwụnye OS X 10.6 na sloppy na iAtkos tupu ị na-eme ka ọ bụ ịghọta nghazi IDJC. Ọfọn, ọ na-ewute m na m chetara gị ịdị umengwụ gị (ma ọ bụ na enweghị gị IQ?) Iji hazie ihe na Linux; agbanyeghị naanị otu ụzọ ị ga-esi mụta ihe bụ ime ihe, ọ bụghị site na iyingomi GNU Radio blog / wiki gbapụrụ agbahapụ (ọ ka dị?) Ikekwe, ọ bụrụ na ị dị uchu na-enweghị ịnụ ọkụ n'obi na-etu ọnụ, onye ga-enyere gị aka ịbụ onye na-abaghị uru.
Hahahahaha bravoooooo ezigbo mma Agụba +1000
Enwere m ọrụ ịkụziri otaku na-abaghị uru na-enweghị ike ịdekọ vidiyo ya banyere otu ọ si egwu obere egwuregwu ya.
1- You maghị etu esi eji google
2- don't maghị etu esi eme ya
3- are bụ onye a kwadoro nke nwere aha sitere na ya.
Ahh na nkuzi ị mere maka pc m, ọ naghị arụ ọrụ ọfụma: D, na mgbakwunye na enwere nkuzi ndị ọzọ na nke ahụ na ịntanetị ma ka mma.
Pc m esighi na afọ iri gara aga, mba, ma eleghị anya ọ dị ike karịa nke gị na ihe niile 🙂
Amamihe. Ọ bụrụ na anyị na ndị obere ngwaike na usoro nhazi nsogbu ... Echere m na GNU / Linux usoro ga-esi na nke a ma ama 1% afụ na desktọọpụ kọmputa.
A ghaghi icheta na obughi ndi nile na eji komputa bu ndi oru aka, ndi guru akwukwo ma obu ndi injinia ka ha gha agha nsogbu nke di n’ime ha.
Ikwu okwu otaku fanboys ihe obula:
Site n'ụzọ, nke a bụ ihe m chọrọ ka ị mee iji gosi m na ị nwere ike
Enwere ndị ọzọ gwara m gwa ha ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya.
Ọ dị mma, achọghị m ịzụ nri ọkụ na-abaghị uru mana maka ụmụ mmadụ, m ga-enye gị nkuzi gị:
I meela, ka anyị lee ma ị̀ ga-amụta ihe.
agụba naanị ma ọ bụrụ na ị ga-enye nkọwa nke PC gị ka nwatakịrị a ghara ime mkpesa banyere ya ọzọ, ọ bụ ezie na ọ ga - ekwu na kọmpụta ya dị elu karịa hahaha na - atụle etu esi amata onwe ya.
Ọ bụ PC nkịtị ejiri obere aka m (Pentium na 2.7 Ghz, 4GB nke RAM, 250 GB diski ike, nkewara Ubuntu Studio 12.04 na Crunchbang Linux 11 Waldorf) eserese eserese na kaadị ọdịyo (Gygabyte H61M-DS2) enweghị kaadị ndị ọzọ. igwu nzuzu obere egwuregwu dika moron otaku. Yabụ na onye ọ bụla nwere ike ịgụ nwere ike ime ya.
Ezigbo mma Brizno, ọ dị ka ọrịa a na-efe efe mechiri ọnụ ya otu oge, na-atụ anya na ndị mụrụ ya ga-enye ya ego ọ chọrọ iji zụta Mac ọ hụrụ n'anya ma kwụsị iji aghụghọ na mpako ya na-egwu anyị. gaa dee maka assholes dika appleweblog, applesfera ma obu gini ka m maara.
Ezigbo vidiyo, @Brizno. Ihe ọzọ bụ, m ga-etinye ya ka m nwee ike ịme ihuenyo m ka m nwee ike ime nkuzi m maka GNU / Linux (dịka m na-eji Debian Stable na GNOME 3.4 Fallback na HP Workstation kachasị maka Windows Vista nke m na-ejikwa ma ọ bụ na draịvụ m).
Agbanyeghị, ọ na-hụrụ na Jack bụ ọtụtụ ihe kensinammuo karịa ndị ọzọ na audio ndekọ usoro na GNU / Linux. Nkwanye ugwu m.
Wepu akwa a na blog, biko Elav, ekwekwala ka o tinye ihe, oge obula o gha agha nzuzu dika ndia !!! ọ dịghị mmejọ na obere ntozu okè gosipụtara ụlọ akwụkwọ sekọndrị (pandev92)
Zaghachi Heero Yuy
ndewo, a na m acho iwunye itunes na chromebook m ma enweghi m ike ... i nwere ike inyere m aka? Daalụ!
Zaghachi ka candelaria
Pisi Linux Mbụ Beta dị